ရဲသျှမ်း: December 2011
အဒိန္နာဒါနမှုသည် ဥစ္စာရှင်များကို အဆက်ဆက်နာလန် မထူနိုင်အောင် ဖိစီးနှိပ်စက်သော အမှုကြီးပေတည်း။ ထိုအဒိန္နာဒါနမှ ရှောင်ကျဉ်၍ အဒိန္နာဒါနဝိရတိ သီလကို စောင့်ထိန်းကြပါလျှင် ထိုဆင်းရဲမျိုးကို ကမ္ဘာမှာ တွေ့မြင်ရတော့မည်မဟုတ်သဖြင့် အဒိန္နာဒါန ဝိရတိသီလသည် ကမ္ဘာသူ၊ ကမ္ဘာသားများကို ဆင်းရဲ ဒုက္ခမှ မုချလွတ်လပ်ခွင့်ရစေနိုင်သော ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာစေနိုင်သော သီလပေတည်း။
ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့သော နှစ်ကာလများမှာ မီးရထား ရုံပိုင်ဘဝနှင့် ရထားအစင်းပေါင်း မြောက်များစွာကို လက်ခံစေလွှတ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ အချိန်နှင့်ပတ်သက်၍ အတိုး၊ အလျှော့လုပ်ခဲ့တာကို ပြန်သတိရသည်။ ကျွန်တော့်ဘူတာကို ရောက်ရှိရပ်တန့် ဆက်လက် ထွက်ခွာမည့် ရထား၏ကုန်တင်တွဲမှာ ပါဆယ်ပစ္စည်း တင်သည့်အခါ ရထားရောက်ချိန်နှင့် ထွက်ချိန်ကို အတိုးအလျှော့လုပ်ပြီး ရထားကြီးကြပ်ရေးရုံးသို့ မမှန်မကန် သတင်းပို့ပါသည်။
ရထားဆိုက်ရောက်ချိန် ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်ကို ၉ နာရီ ၂၀ မိနစ်ဟု တိုးပြောပြီး၊ ရထားအမှန်တကယ်ထွက်ခွာချိန် ၉ နာရီ ၃၀မိနစ်ကို ၉နာရီ ၂၅ မိနစ်ဟုလျှော့ပြောကာ အဝင် ၅ မိနစ်၊ အထွက် ၅ မိနစ် ၁၀ မိနစ်တိတိ အချိန်ခိုးယူလိုက်ပါသည်။ ကျွန်တော့်ဘူတာ ကုန်တင်ရန်သတ်မှတ်ချိန်က ၅ မိနစ်သာရှိပါသည်။ မလောက်ငပါ။ ပါဆယ်ပစ္စည်း အကုန်တင်နိုင်ဖို့က ၁၅ မိနစ်ခန့်ရမှသာ အဆင်ပြေပါမည်။ သည့်အတွက် ကျွန်တော် အချိန်ခိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပါဆယ်ပစ္စည်းများများတင်ရခြင်းဖြင့် ဘူတာဝင်ငွေကောင်းသလို ဝန်ထမ်းများလည်း စိုစိုပြည်ပြည်ရှိသည်မို့ သတ်မှတ်ချိန်ထက်ပိုသောအချိန်ကို စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာပဲ ကျွန်တော်နှင့်အတူ စက်ခေါင်းမောင်း၊ ရထားထိန်းတို့ကပါ ပူးတွဲအချိန်ခိုးယူကြပါသည်။ ခေတ်မီနိုင်ငံများမှာလို ဘူတာတွေကို ရထားဖြတ်သန်း၊ ရပ်တန့်၊ ထွက်ခွာ စသည့် သံလမ်းပေါ်က အခြေအနေကို ကွန်ပျူတာနှင့် ဖမ်းယူမကြည့်နိုင်သေးသော်လည်း ရထားကြီးကြပ်ရေးရုံးရှိ Chart တွင် မင်နီ၊ မင်ပြာ၊ မင်စိမ်းတို့ဖြင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ မှတ်တမ်းတင်နေသည်မို့ ကျွန်တော်တို့ အချိန်ခိုးခြင်းကို ရထားကြီးကြပ်ရေးအုပ်က ထင်းထင်းလင်းလင်းသိနေပါသည်။ သည့်အတွက် ကျွန်တော်တို့က ဥပေက္ခာမပြုတတ်ပါ။ ဤသို့ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ အချိန်တွေကို ပျော်ပျော်ကြီးခိုးယူခဲ့ဖူးပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ခိုးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကြောင့် ဘယ်သူတွေထိခိုက်နစ်နာသွားသလဲ ကျွန်တော် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ မစဉ်းစားခဲ့ပါ။ ယခု ကျွန်တော် တွေးဆစဉ်းစားမိတော့ လိပ်ပြာလွင့်မတက် တုန်လှုပ်သွားပါသည်။ ရထားစီးခရီးသည်တွေ ရထားတစ်စင်းမှာ ပျမ်းမျှအနည်းဆုံး ၆၀၀ ကျော်တော့ရှိပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော့်ဘူတာမှာတင် ၁၀ မိနစ်ခိုးယူလိုက်ပြီမို့ ခရီသည်ပေါင်း ၆၀၀ ကျော်၏ မိနစ်ပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်၊ နာရီပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကို ကျွန်တော်မဆင်မခြင် ခိုးယူခဲ့တာပါပဲ။
ကျွန်တော်သည် သူ့ဥစ္စာကိုခိုး၍၊ တိုက်၍၊ လုယက်၍ယူငင်ဖူးသူမဟုတ်သောကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဒိန္နာဒါန သီလစင်ကြယ်သူဟု ထင်ယောင်မှားခဲ့ခြင်းသည် ယခုအခါ တက်တက်စင်အောင် လွဲပေရော့မည်။
“နှောင့်နှေး၊ ဖင့်လေး၊ တုန့်ဆွဲ၊ ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းတို့သည် အချိန်ကိုခိုးခြင်းမည်၏”ဆိုသည့် စာသားလေးကို ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့၊ မှတ်သားခဲ့သော်ငြား ကျင့်ကြံနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သနား၊ ညှာတာ၊ စောသေးလို့၊ ပူအိုက်လို့၊ ချမ်းလို့၊ မိုးရွာလို့၊ ဆူညံလို့၊ မီးပျက်လို့၊ ဗိုက်ဆာလို့၊ ဗိုက်ပြည့်လို့၊ အိပ်ရေးပျက်လို့၊ ပိုက်ဆံမရှိလို့ စသည်ဖြင့် နှစ်ကာလ များစွာကို ပေါ့ရှပ်ရှပ်ဖြတ်သန်းပြီး အချိန်တို့ကို ဆုံးရှုံးစေခဲ့ဖူးပါသည်။
ခိုးခြင်းနှင့်ဖြုန်းခြင်းကို ယှဉ်တွဲ၍အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြည့်ပါသည်။ “ခိုးခြင်းက ကိုယ့်အတွက်ရယူတာ၊ ဖြုန်းခြင်းက အကျိုးမရှိသုံးစွဲပစ်တာ”
သည်လိုဆိုတော့ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အချိန်တွေကို အကျိုးမရှိဖြစ်စေတာဟာ ဖြုန်းတာပဲလေ၊ ခိုးတာမှမဟုတ်တာ။ ခိုးတာမဟုတ်လျှင်တော့ အဒိန္နာဒါနကံမကျူးလွန်ဘူးပေါ့။ ကျွန်တော်ဖွဖွလေးတွေးပြီး ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ယက် ကြည့်တော့ တော်တော်လေးကို ပျော်သွားပါသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေကို ဖြုန်းပစ်တာ ဘာဖြစ်သေးလဲ၊ ဘယ်သူ့ထိခိုက်မှာမို့လဲ။
ကျွန်တော် White Lie ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရသစ်ကို ကြားခဲ့ဖူးပါသည်။ မုသားချိုချိုဟု မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်လှလှလေး ဖွင့်ကြပါသည်။ ကိုယ်က လိမ်ညာပြောဆိုသော မုသားစကားသည် တစ်ဖက်ကြားရသူအဖို့ စိတ်လက်ချမ်းမြေ့စေခြင်းကို ဆိုလိုသည်ဟု ကျွန်တော် နားလည်ထားပါသည်။ ရက်ပိုင်း လပိုင်းမျှသာ အသက်ရှင်ခွင့်ရှိသော လူမမား၏ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သားသမီး၊ မိဘ၊ ဆွေမျိုး စသည့် လူနာရှင်အား…
“အိမ်မှာ သက်သောင့်သက်သာနဲ့ထားပြီး မိသားစုဝင်တွေ ယုယုယယပြုစုပေးပါ၊ လူနာမှာ ဒါလိုအပ်နေတယ်။ ဆန္ဒရှိတဲ့အစားအစာလေးတွေလည်း ကျွေးပါနော်” စသည်ဖြင့် ပြောဆိုခြင်းသည်။ White Lie ဟု နားလည်မိပါသည်။
သည်လိုဆိုလျှင် White Thief ကောရှိပါသလား။ ကျွန်တော် ရှာရှာဖွေဖွေ တွေးကြည့်ပါ သည်။ ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာ နိုင်နေသောအသင်းက ပွဲပြီးဆုံးခါနီး ဖြည့်စွက်အချိန်မှာ ဘောလုံးကို ဘေးလိုင်းဆီဆွဲပြေး၊ တစ်ဖက်အသင်းအား လုယူမရအောင် နှစ်ယောက်၊ သုံးယောက် ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်ကာထား၊ လက်ပစ်ဘော၊ ဂိုးအောက်ဘောဖြစ်အောင်လုပ်၊ ဘောလုံးကို စိမ်ပြေနပြေကောက်ယူ၊ ဂိုးသမားကလည်း တော်တော်နဲ့ကန်မတင်၊ အနိုင်အတွက်ရနိုင်သောနည်းလမ်းစုံဖြင့် အချိန်ခိုးယူခြင်းသည် White Thief ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ ဒိုင်လူကြီး လက်မခံပါ။ အဝါကတ်ပြသတိပေးပါသည်။ ရှုံးနိမ့်သောအသင်းပရိသတ်၏ အော်ဟစ်လှောင်ပြောင်ခြင်းကို ခံရပါတော့သည်။ သည်တော့ White Thief ဆိုတာ လုံးဝရှိလိမ့်မည်မထင်ပါ။
အချိန်ဖြုန်းတာနှင့် အချိန်ခိုးတာကို ခွဲခြမ်းပြီး ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ယက်ခဲ့သော ကျွန်တော့်အပျော်က တာရှည်မခံတော့။ ဆပ်ပြာပူဖောင်းလေးကို ဖျက်ခနဲမှာပဲ ကွဲထွက်သွားပါသည်။ ကျွန်တော်ဖြုန်းပစ်လိုက်သည့် အချိန်တွေကြောင့် ကျွန်တော်နှင့်ဆက်နွှယ်နေသော မိသားစုတွေ၊ ဆရာတွေ၊ တပည့်တွေ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေ၊ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ ခံစားခွင့်တွေ ဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့ပါလိမ့်မည်။ ဘယ်သူမှမသိလိုက်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခိုးမှုကနေ စဉ်ထွက်လာတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေပဲဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်နှင့်ဆက်နွှယ်သူတို့သည် ကျွန်တော်၏ ဖင့်လေးမှု၊ အချိန်ဆွဲမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်တန်စွမ်း၏အထွတ်အထိပ်ကို မရောက်ရှိဘဲ လမ်းခုလတ်တွင် ရပ်တန့်လိုက်ရခြင်းမျိုး ရှိခဲ့သည်ဆိုလျှင်တော့ ဆုံးရှုံးမှုတရားခံသည် ကျွန်တော်မှတစ်ပါး အခြားမရှိပြီ။ သည်သို့ဆိုလျှင် ကျွန်တော်သည် အချိန်တွေကို ဖြုန်းသူသက်သက်မဟုတ်တော့။ တစ်ပါးသူ ရပိုင်သော မျှော်လင့်ချက်။ ရည်မှန်းချက်တို့ကို ခိုးယူသူဖြစ်တော့မည်။
ညဉ့်သန်းခေါင်အမှောင်ရိပ်မှာ တိတ်တဆိတ်ချွတ်နင်းမျက်နှာဖုံးစွပ်၊ ပဝါစည်းတာမှ သူခိုးမဟုတ်။ ခိုးတာကို ခိုးတာလို့မသိ။ တစ်နည်း အကုသိုလ်မှန်း၊ ကုသိုလ်မှန်း ခွဲခြားမသိနိုင်တဲ့ အနုသယမောဟခေါ်သည့် အကြမ်းစား မောဟကြီးသူဟာ လူမိုက်၊ လူမည်း၊ လူမှောင်၊ လူပြိန်း၊ လူအ၊ လူန၊ လူတိုင်း၊ လူမှိုင်း၊ လူပျင်း၊ လူဖျင်းဟု သတ်မှတ်သည်ဆိုတော့ ကိုယ့်ပယောဂဖြင့် တစ်ပါးသူ၏ အချိန်တွေကို ဆုံးရှုံးလေလွင့်စေခဲ့ဖူးသူ ကျွန်တော်သည် “အနုသယမောဟကြီးသူ ဖြစ်မှန်း မသိ ဖြစ်နေပါပကော”
ကျွန်တော့်မှာ အပြေးအလွှားစဉ်းစားရုံမျှနှင့်ပင် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပေါ်လာသည်ဆိုတော့ တစိမ့်စိမ့်တွေးမိလျှင်တော့ စီကာစဉ်ကာနှင့် အတောမသတ်အောင်ရှိတော့မည်။
ဆရာသိုက်ထွန်းသက်၏ ကဗျာလေးတစ်ပိုဒ်ကို သတိရပါသည်။
နာရီလက်တံများကတော့ တရွေ့ရွေ့နေပါမည်။ စက္ကန့်၊ မိနစ်၊ နာရီ လက်တံတို့က စွက်ဖက်မှုမပါဘဲ ရပ်တန့်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ နာရီတစ်လုံးကို ရပ်တန့်စေဦးတော့ နောက်ထပ်၊ နောက်ထပ် နာရီပေါင်းများစွာ ကျန်ရှိနေပါဦးမည်။ ရပ်တန့်ဖို့ငှာ မစွမ်းသာ။ ဘယ်သူက တားဆီးနိုင်မှာမို့လဲ။ အချိန်ယန္တရားကြီးကို ဘယ်သူက ချုပ်ကိုင်နိုင်မှာလဲ။
နာရီလက်တံတို့ကတော့ ခြေလှမ်းသွက်သွက်ဖြင့် တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ် လည်နေပါလိမ့်မည်။ တွေဝေခြင်းအလျဉ်းမရှိပြီ။ အိပ်မက်တို့ဖြင့် ထွေပြားနေမည်မဟုတ်။ နာရီကို ကျွန်တော်တို့ရှက်ရပါတော့မည်။
ကျေကျေနပ်နပ် မပေးအပ်သော သူတစ်ပါး၏ သက်ရှိပစ္စည်းကို ခိုးဝှက်ယူခြင်း၊ ဓားပြတိုက်၍ယူခြင်း၊ အာဏာဖြင့်ရယူခြင်း စသည်ဖြင့် အဒိန္နာဒါနကို လူ့ဘဝ၌ ပြုခဲ့သူသည် သေသောအခါ ငရဲ၌ဖြစ်ရတတ်၏။
အို…ကျွန်တော်သေလွန်ပြီးသော် ငရဲဘုံသို့ ရောက်မှာလေလား။
(ဆရာချစ်ဦးညို၏ “အဒိန္နာဒါန” (သင့်ဘဝမဂ္ဂဇင်း)ကို ခံစားပြီး တွေး/ရေးပါသည်)
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က အဖေ့အရိုက်ခံရတာလေးကို ပြောချင်ပါသည်။ ဒီတုန်းက ကျွန်တော ၁၀နှစ် မပြည့်တတ်သေးပါ။ ညီမလေး မဂျူး၊ မစူးတို့က ၈နှစ် နှင့် ၆နှစ် လောက်စီရှိမည်။. မောင်နှမ ၃ ယောက်လုံး အရိုက်ခံရတာကတော့ မှတ်မှတ်ရရပါပဲလေ။
ကျွန်တော်တို့အဖေက ရေဒီယိုဖွင့်တာ သိပ်ကျွမ်းကျင်သည်။ ဒီလိုဆိုတော့ ကိုယ့်အဖေကိုယ် ဂုဏ်ယူလွန်းရာ ကျနေမလားမသိ။ ကျွန်တော်ကတော့ အခုအချိန်ထိ အဖေ့လို ရေဒီယိုလိုင်းပေါင်းစုံဖွင့် တတ်သူကို မကြုံသေးပါ။ အဖေမို့ ရေဒီယိုဖွင့်ပြီဆိုလျှင် ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဝင်စားစရာ လိုင်းတစ်လိုင်းကတော့ မိနေတတ်တာပါပဲ။ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်၊ ကုလား လိုင်းစုံ အသံစုံဖွင့်တတ်သည်။ အဲဒီနေ့က မနက် ၆ နာရီခွဲလာသည့် ရေဒီယိုလိုင်းကို အဖေဖွင့်ပြီးနားထောင် နေသည်။ လျှပ်စစ်မီးနှင့် ဖွင့်ရသည့် အဖေ့ ရှေးရေဒီယိုကြီးက ဘီရိုလေးပေါ်မှာ စနစ်တကျ တခမ်းတနား။ အဖေက အမေကိုယ်တိုင် ဖျော်သည့် လက်ဖက်ရည်ကျဆိမ့်ဆိမ့်ကို အရသာခံသောက်ရင်း ရေဒီယိုကို နားစွင့်နေသည်။ နောက်တော့ အဲ့ဒီလိုင်းပြီးသွား၍ အပိတ်တီးလုံးလာတော့ အဖေလက်ဖက်ရည်စားပွဲမှ ထသည်။ သည်မှာတင်ပဲ ……
စားပွဲပေါ်က နံပြားထောပတ်သုတ်ကို ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမ သုံးယောက် မတိုင်ပင်လိုက်ရဘဲ လုစားကြသည်။ ရုတ်တရက် ၀ုန်းဒိုင်းကြဲသွားတော့ အဖေက ရေဒီယိုလိုင်းညှိနေရာမှ လှည့်ကြည့်သည်။ ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမကတော့ နံပြညးထောပတ်သုတ်ကို အလုအယက်….။
“ဟာ… မင်းတို့ ဘယ်လိုဖြစ်နေကြတာတုန်း …. လာစမ်း .. လာစမ်း….. လက်ပိုက်ပြီးလာခဲ့စမ်း”
ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်လိုက်ကြသည်။ ထောပတ်ဆီတွေ၊ သကြားမှုန့်တွေနဲ့ လက်က ပေညစ်နေပြီ၊ တစ်ဖြည်းဖြည်းနှင့် အဖေ့ဆီတိုးသွားတော့ ……..
“အဖေစားပြီးတာ၊ မပြီးတာမသိ ………. မင်းတို့ မောင်နှမတွေ မုန့်လုစားတာ မရှက်ကြဘူးလား”
ကျွန်တော်တို့ ၃ ယောက် ခေါင်းကိုသာ တွင်တွင်ငုံ့နေသည်။
“ မင်းတို့ ဘာမှမစားရသေးဘူးလား”
“စားပြီးပြီအဖေ အမေက ထမင်းကြော်နဲ့ ကော်ဖီနဲ့”
“သမီးလည်းစားပြီးပြီ” ညီမလေးနှစ်ယောက်က ပြိုင်တူဖြေသည်။
“သားတို့သမီးတို့ ထမင်းကြော်လည်း စားပြီးပြီ၊ ကော်ဖီလည်းသောက်ပြီးပြီ၊ ဒါကို မ၀သေးလို့ လုစားတာလား “
ညီမလေး မစူးက ခေါင်းယမ်းပြသည်။ ကျွန်တော်က “မဟုတ်ဘူး.. အပျော်လုစားတာ”
“အပျော်” အဖေ့အသံက ရယ်သံစွက်စွက်နဲ့မို့ ကျွန်တော်က သိပ်မကြောက်တော့
“မင်းတို့ အဖေစားတဲ့ နံပြားထောပတ်သုတ်စားချင်ရင် အဖေ့ကိုပြော အဖေ၀ယ်ကျွေးမှာပေါ့၊ ခုတော့ မင်းတို့ စည်းကမ်းမဲ့လွန်းတယ်၊ အဖေမင်းတို့ကို ဒဏ်ပေးရမယ်”
အဖေက ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် ဘီရိုလေးပေါ်မှ သစ်သားပေတံလေး ယူပြီးကျွန်တော်တို့ တင်ပါးကို တစ်ချက်စီရိုက်သည်။. သာသာဖွဖွ ရိုက်တာမို့မနာပါ။ “နောက်တစ်ခါဆို အရှိုးရာထင်အောင် ရိုက်မှာနော်” ဟုပြောအပြီးမှာ ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမ အိမ်ရှေ့ကွက်လပ် ကလေးဆီ ပြေးသွားကြသည်။
အဖေရိုက်တာက မနာတော့ တဟီးဟီး တဟားဟားနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမ ဟီးလေးတိုက်နေကြသည်။ “ငါက နှစ်ခု၊ ငါက သုံးခု” နှင့် နံပြားထောပတ်သုတ် လုစားခဲ့တာကို ပြိုင်လိုက်ကြသေးသည်။
ဟောဒီ ဘူတာရုံလေးကတော့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးလမ်းမကြီး မှာရှိသည်။ ရုံပိုင်၊ ရုံပိုင်လေး၊ လမ်းခွဲကိုင် ၄ ယောက်နှင့် သာဖွဲ့စည်းထားသည့် ဘူတာရုံသေးသေးလးပဲဖြစ်သည်။ ဒီဘူတာလေးမှာ ခရီးသည်အတက်၊ အဆင်းလည်းမရှိ။ လော်ကယ်ရထားကလည်း ဖျက်သိမ်းသွားပြီမို့ ဘာရထားမှ ရပ်တန့်ရန် သတ်မှတ်မထား။ ရထားများ တောက်လျှောက် ခုတ်မောင်း။ တစ်ခါတစ်ရံ ရထားကြီးကြပ်ရေးအုပ်က ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ရထားများဆုံရန်၊ ကျော်ရန် ခနတဖြုတ် ရက်ရုံမှလွှဲ၍ ရထားအားလုံး တောက်လျှောက်ခုတ်မောင်းရသည့် သွားလာရေးသက်သက် ဘူတာလေးပဲဖြစ်သည်။ ခရီးသည် မရှိ၊ ကုန်ပစ္စည်း အတင်အချမရှိသည့် ဘူတာမို့ ဘူတာဝင်ငွေလည်းမရှိ ပါးရှားလွန်းတာမို့ ၀န်ထမ်းများ စိုးထိတ်သည့် ဘူတာလေးလို့ ဆိုနိုင်ပါသည်။
ဒီတော့ ဒီဘူတာလေးကို ရောက်လာသည့် ဘူတာဝန်ထမ်းများကို တိုင်းအရာရှိများက တစ်နှစ်သာ ထားပေးပြီး ခရီးသည်၊ ကုန်စည် စည်ကားရာ ဘူတာကြီးများသို့ ပြောင်းပေးကြပါသည်။ အပြောင်းရမီ တစ်နှစ်ကတော့ ဒုက္ခ၊ သုက္ခတွေ တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီဘူတာလေးမှာ ရုံပိုင်၊ ရုံပိုင်လေး ၂ ယောက် တစ်လှည့်စီ ၁၀ ရက် တစ်ဂျူတီ ဆင်းပြီး အားရက်တွေမှာ မိသားစုအတွက် ရုန်းကန်ကြဖြင့် တစ်နှစ်တာ အချိန်လေးကို နွမ်းမောစွာဖြတ်သန်းကြရသည်။ ချို့တဲ့သော ဘူတာရုံလေးနှင့် ချို့တဲ့သော အစုအဖွဲ့ကလေးဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
ခုတော့ ဒီဘူတာလေးကို ကျွန်တော်က လာဆင်းပေးနေရပြီ။ အမြဲတမ်း တာဝန်ကျ ရုံပိုင်လေးကိုအောင်စိုး ခွင့်ယူသွားသည်မို့ ကျွန်တော့်မှာ တာဝန်ကျရာ ဘူတာကြီးမှ လာဆင်းပေးရခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်က ခေတ္တလာဆင်းရသူ ပီပီ စားအိုး၊ စားခွက်မပါ၊ ဆင်းပေးရမည့် ၁၀ ရက်တာအတွက် ဆန်၊ ဆီ၊ ကြက်ဥ၊ ဆေးလိပ်၊ ပဲခြမ်း၊ လက်ဖက်တို့ကို ဇနီးသည်က ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ထည့်ပေးလိုက်သည်။ ကျွန်တော်ပါသည့် ရိက္ခာအားလုံးကို “ကိုရေး” အပ်လိုက်ရုံဖြင့် ကျွန်တော့် စားရေးကိစ္စကပြီးပြီ။
ကိုရေးဆိုတာက ဒီဘူတာရုံလေးကို တွယ်တာ၊ သံယောဇဉ် ရှိသည့် ဆည်ကန်ရွာသားတစ်ယောက်ပင် ဖြစ်သည်။ ဆည်ကန်က ဘူတာရုံလေးနှင့် တစ်မိုင်ခန့်ဝေးသည်။ ဟိုးအရင် ရုံပိုင်အဆက်ဆက် ၏ လက်စွဲအဖြစ် ကိုရေးက အရေးပါနေခဲ့သည်။ ရွာမှာ လယ်လေး၊ ယာလေး၊ အမွေရထားတာရှိပေမယ့် ကိုရေးက သူများကို သီးစားပေးပြီး ဘူတာလေးရဲ့ ၀န်ထမ်းလိုင်းခန်းမှာ ကုပ်ကပ်နေသည်။ မိသားစုပါ ခေါ်လာပြီး အခြေချသည်။ မသိသူကတော့ ကိုရေးကို ၀န်ထမ်းဟုပင် ထင်သည်။ ထင်ရလောက်အောင်လည်း ကိုရေးက လုပ်တ်ကိုင်တတ်သည်။ ရထားသွင်း၊ ထုတ်၊ ပိုင်းလော့လုပ်၊ တစ်ခါတစ်ရံ ဘီးပူတွဲဖြုတ်ရှန်တိန်တောင် စနစ်တကျ ၀င်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ တွဲချိတ်၊ တွဲဖြုတ်၊ အချက်ပြအားလုံးကို သင်တန်းဆင်းလမ်းခွဲကိုင် တစ်ယောက်လိုကျွမ်းကျင်သည်။ ရုံပိုင်ကလည်း အားကိုးရ၊ လမ်းခွဲကန်ုငတွေကလည်း သက်သာဆိုတော့ ကိုရေးကို အားလုံးခင်တွယ်နေသည်။
ပြီးတော့ ကိုရေးက အိုးသူကြီးပါ လုပ်လိုက်သေးသည်။ ရုံပိုင်အပါအ၀င် လမ်းခွဲကိုင် အားလုံးရဲ့ ထမင်းဟင်း ကိစ္စကို ကိုရေးက စီစဉ်ချက်ပြုတ်ပေးသည်။ မိသားစုမပါသော ၀န်ထမ်းများအတွက် စားသောက်ရေး ကိစ္စက ကိုရေး၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အောက်မှာနေတော့၊ ကိုရေးချက်ပြုတ်ကျွေးတာစား၊ အထွန့်မတက်။
ကိုရေးကလည်းရှင်းသည်။ အားလုံးအတွက် ရှိတာလေးနှင့် လောက်ငှမျှတအောင် စီစဉ်ပေးရတော့ ပုံစံနှင့်ပဲ ကျွေးသည်။ ရုံပိုင်ကြီး ဟင်းပိုမရ၊ ကိုယ်တာ (Quota) ထက်မပို။
၅ အဆန်အမြန်ရထားတစ်ဖက် ဘူတာက ချဉ်းကပ်ခွင့်တောင်းတာကို ခွင့်ပြုလိုက်ပြီး တခြားတစ်ဖက်ဘူတာသို့ တောက်လျှောက် ဆက်လက်စေလွှတ်နိုင်ရန်အတွက် လမ်းရှင်းခွင့်ပြုချက် ရယူလိုက်သည်။ အ၀င်၊ အထွက် လမ်းရှင်း အပေးအယူအချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာ စာအုပ်အသီးသီးတွင် ဖြည့်ပြီး လမ်းရှင်း ကြိမ်ကွင်းမှာ လမ်းရှင်းစာရွက်ချည်ပြီး ဘူတာနံရံထောင်ထားချိန် လမ်းခွဲကိုင် ကိုကျော်ကြီးက ကြိမ်ကွင်းကြီးကို ဆွဲယူပြီး ရထားလာရာဖက်ဆီ စိုက်စိုက် စိုက်စိုက်ဖြင့် ထွက်သွားသည်ကို ငေးရင်း ဘူတာတွင်း ပြန်အ၀င်မျာ ကိုရေးက ထမင်းပွဲလာချသည်။ ထမင်းတစ်ပန်းကန်၊ ကြက်ဥတစ်ခြမ်းက ခရမ်းချဉ်သီး ရေပေါလေထဲမှာ ပက်လက်။ ငရုတ်သီးကြော် ၃၊၄ တောင့်က ထမင်းပေါ်မှာ…..။
ကျွန်တော် ကြာက်ဥတစ်ခြမ်းကို တစ်ဝက်ပိုင်းလိုက်သည်။ ထမင်းကိုလည်း တစ်ဝက်ပိုင်းလိုက်သည်။ ကြက်ဥတစ်စိတ်၊ ထမင်းပန်းကန်ဝက်၊ ငရုတ်သီးကြော် ကျွန်တော့်ညစာ….၊ ကျွန်တော် ရောင့်ရဲနိုင်ပါသည်။ တစ်ဖက်ဘူတာမှ ရထားထွက်ချိန် ပေးတော့ ထမင်းစားခြင်းကိစ္စလည်း ပြီးပြီ၊ ရထားကြီး အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ တောက်လျှောက် ခုတ်မောင်းနိုင်ခြင်း အချက်ပြ ပြသရန် ဓါတ်မီးနှင့် ကော်ပြားအစိမ်းပိုင်းလေးယူပြီး ဘူတာစကြံင်္သို့ ထွက်လာလိုက်သည်။
ရထားကြီးတောက်လျှောက် ခုတ်မောင်းသွားပြီး ရထားထိန်းတွဲ ဘူတာလေးကို ဖြတ်ကျော်ပြီးချိန်မှာ ဘူတာထဲပြန်ဝင်ပြီး တစ်ဖက် ဘူတာနှင့် ရထားကြီးကြပ်ရေးရုံးသို့ ဖုန်း၊ စက်ဖြင့် ထွက်ခွာချိန်ပေး၊ ရထားစေလွှတ်လိုက်သော ဘူတာသို့ ရောက်သတင်းပေးပြီး ချိန်မှာ စားပွဲလေးဆီအကြည့်ဝေ့တော့ ထမင်းပွဲလေးမရှိတော့ ကိုရေးသိမ်းသွားပြီထင်သည်.။
လမ်းခွဲကိုင် ကိုကျော်ကြီး ရထားကြီး စက်ခေါင်းမှ ပြန်ပစ်ချခဲ့သော လမ်းရှင်း ကြိမ်ကွင်းကြီး ကိုင်လျက် ဘူတာထဲ ၀င်လာရင် “ဆရာ ထမင်းစားပြီးပလား” အမေးကို ခေါင်းညိတ်ရာမှ “ကိုကျော်ကြီးလည်း သွားစားတော့လေ …. ခဏနေ ၃ အဆန်လာတော့မှာ” ပြောအပြီးမှာ ကိုကျော်ကြီး ဘူတာနောက်ဖက် ကိုရေးတို့ အိမ်ခန်းဘေးဆီ ခပ်သုတ်သုတ် ထွက်ခွာသွားသည်။
“မင်းသက်သက် လူပါးဝတာ ဖျံကျတာ အချင်းချင်းလုပ်ဖို့ မကောင်းဘူး။”
“ဟာကွာ …. ငါတောင်းပန်ပါတယ်၊ ရုံပိုင်လေးကြားသွားရင် မကောင်းဘူး”
“ကြားကြားကွာ … မင်း အကျင့်သိသွားတာပေါ့”
ဘူတာနောက်ဖေး ကိုရေး အိမ်ခန်းလေးဆီမှ စကားများရန်ဖြစ် သံများကြားသောကြောင့် ကျွန်တော် ပြေးသွားလိုက်သည်။ လမ်းခွဲကိုင် ကိုကျော်ကြီးနှင့် ကိုသန်းဦးတို့ နှစ်ယောက် ထိုးကြိတ်ကြမယ့် အခြေအနေသို့ ရောက်နေကြပြီ။
“ဟာ ……. ဘာဖြစ်ကြတာလဲ ရပ်ကြစမ်း”
ကျွန်တော့် ဟိန်းဟောက်သံကြောင့် လမ်းခွဲကိုင်ကြီးနှစ်ယောက် ခပ်ခွာခွာဖြစ်သွားသည်။ ဘက်ထရီမီး မှိန်မှန်အောက်မှာ ကိုကျော်ကြီးမျက်နှာက မကျေနပ်ချက်များနှင့် ခပ်ထန်ထန်၊ ကိုသန်းဦး ကတော့ မသိမသာ ခေါင်းငုံ့ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
“ခင်ဗျားတို့ဗျာ၊ ကြီးကောင်ကြီးမားနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ ရန်ထဖြစ်ရတယ်လို့ … ကဲကဲ ပြောပါဦး ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ”
ကျွန်တော့အမေးမှာ ငေါက်ငမ်းသံများ ပါနေပါမည်။ မတတ်နိုင် လက်အောက်ဝန်ထမ်း နှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်သည့် ကိစ္စကိုတော့ ထိထိရောက်ရောက် ဖြေရှင်းပေးမှရမည်။ သွားလာရေးဝန်ထမ်းတွေမို့ အငြိုးအတေးများနှင့် အလုပ်တွဲဖက်လုပ်လျှင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
“ကဲ….. ကိုသန်းဦးစပြော” ကိုသန်းဦး ခေါင်းငုံ့နေရာမှ မော့သည်။
“ဒီတစ်ခေါက် ဘူတာဆင်းရတော့ ကျွန်တော်ဘာမှ ပါမလာဘူးဆရာ၊ အိမ်အတွက်လည်း ဘာမှ ရေရေရာရာ လုပ်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး ….. ဒီကောင် ကျော်ကြီးဆီက ကပ်စားရမှာ ခုတော့ ဒီကောင်ကလည်း ဗလာပဲ”
“ဟုတ်တယ်ဆရာ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေတော့ ကျွန်တော်လည်း လက်ချည်းထွက်လာခဲ့တာ”
ကိုကျော်ကြီးက စိတ်ပြေသွားဟန်ရှိသည်။ စောစောက ဒေါသတွေမရှိတော့ လေသံကမခက်ထန်တော့။ “ဒီတော့ ဆရာရယ် ကိုရေးကလည်း ဆရာ့အတွက်သာ ဟင်းတစ်ခွက် မယ်မယ်ရရချက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ အတွက်တော့ ချဉ်ပေါင်၊ ကန်စွန်းရွက်နဲ့ လယ်ထဲက နှိုက်လာတဲ့ ဂဏန်းလုံးပြုတ်နဲ့ ကျွေးတာပေါ့ … “ ကိုသန်းဦး စကားမဆုံးခင်မှာပဲ။
“မတင်းတိမ်ဘူး ဆရာ” ကိုကျော်ကြီး ပြောပြီး ခေါင်းငုံ့သွားသည်။
“ဆရာလည်း …….. ဒါကို ရိပ်မိနေတယ်ထင်တယ်၊ ဆရာ့ထမင်းပွဲ တစ်လှည့်စီ သိမ်းကြေးလေ၊ နေ့လည်က သန်းဦး သိမ်းပြီးပြီ …… ညနေ ကျွန်တော့အလှည့် အခုတော့ ကျွန်တော့ ပွိုင့်ဆီသွားတုန်း ဒီကောင် ထမင်းပွဲယူသိမ်းသွားတာ “
ကျွန်တော် ထိတ်ကနဲ ဖြစ်သွားပြီး ကိုသန်းဦးကို ကြည့်မိတော့ ကိုသန်းဦး ခေါင်းငုံ့လျက်သား ………
“ကျွန်တော် ဂဏန်းလုံးနဲ့ ချဉ်ပေါင်ရွက်ပြုတ် ဘယ်လိုမှ မျိုမကျလို့ပါဆရာရယ်” တုန်ခါနေသော စကားသံမှာ ရှိုက်သံတို့ ရောစွက်လို့နေသည်။
ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမငယ်ငယ်က အဖေ့လက်ဖက်ရည်စားပွဲပေါ်က မုန့်လုစားခဲ့တာကို ပြန်သတိရသည်။ အဖေက သစ်သားပေတံလေးနှင့် ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမကို ဖွဖွလေးရိုက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ ပျော်ခဲ့ကြသည်။ အခု ကျွန်တော် ကိုကျော်ကြီးနဲ့ ကိုသန်းဦး တို့ ရန်ဖြစ်တာကို အရေးယူ ဒဏ်ပေးရပါမည်။ အဖေ့လိုပဲ ပေတံလေးနဲ့ ဖွဖွရိုက်ရင်တော့ ကြားလို့မကောင်းဖြစ်မည်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ပျော်သွားအောင် အဖေ့လိုပဲ ပေတံလေးနဲ့ ဖွဖွလေးရိုက်ကြည့်ချင်ပါသည်.။
(ဘူတာရုံကလေး ၀တ္ထုတိုစုစည်းမှု မှ)
ပြီးပြည့်စုံသော ပြက္ခဒိန်တစ်ခုမှာ နိုဝင်ဘာလဆိုတာရှိမည်။ အဲ့သည်လမှာ ၆ ဆိုသော ရက်ကလေး ရှိမည်။ ရက် ခုနစ်ရက်မှာ နိုဝင်ဘာ ၆ သည် တစ်နှစ်နှင့် တစ်နှစ်ကွဲလွဲမည်ဖြစ်သော်လည်း ၄နှစ်တစ်ကြိမ်မှာ မွေးနေ့၊ မွေးလ၊ မွေးရက်တစ်ထပ် တည်းကျစေသော ပြက္ခဒိန်တီထွင်သူ နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တို့၏ ဖော်မြူလာကို ကျွန်တော်က အံ့သြနေတတ်ပါသည်။
သည်နှစ်မှာ ၆ နိုဝင်ဘာနှင့် သောကြာနေ့တစ်နေ့ထဲ မကျသော်လည်း စနေနေ့ဖြစ်နေသည်ကိုက တစ်မျိုးကောင်းပါသည်။ ကျောင်းပိတ်သော သား ရဲဝဏ္ဏနှင့် သမီး နရီလှိုင်း တို့ကိုပါ ခေါ်လျက် မိသားစုဘုရား တက်ဖြစ်သည်။ ယခင်နှစ်တွေတုန်းက မိသားစုဘုရားသွားခဲ့သော်လည်း ကျောင်းပြန်တက်ရမည့်သားနှင့်သမီး ကြောင့် ဘုရားမှာကြာမြင့်စွာမနေခဲ့ရ။ ပုဆိန်ပေါက်ဦးချ ဂြိုဟ်ပြေနာမ်ပြေမှာ သက်စေ့ရေပူဇော်တော့လည်း ဖြေးဖြေးညင်ညင်သာသာမဟုတ်တော့ သင်္ကြန်ရေပက်သလိုကိုဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ထင်ရသည်။ ဟော သည်နှစ် မှာတော့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ဘုရားဖူး၊ ဆွမ်းတော်၊ ပန်းကပ်၊ ရေသပ္ပာယ်၊ ရွှေသင်္ကန်းကပ်၊ ပါလာသည့် လက်ကိုင်ဖုန်းလေးဖြင့် မိသားစုတစ်လှည့်စီ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြနှင့် အချိန်တွေ အများကြီး ပေးနိုင်ခဲ့သည့်အပြင် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများဆီ ဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျပို့၊ မန္တလေးရှိ မောင်နှမတွေဆီ ဖုန်းဆက်ဖြစ်သည်။ မန္တလေးရှိ အဖေ့ဆီ ဖုန်းဆက်တော့ ညီမအငယ်က ဖုန်းကိုင်သည်။ အသံက အိပ်ချင်မူးတူး။
“ဟေ့ … အိပ်တုန်းလား ငါ့မွေးနေ့ဘုရားလာကြတာလေ နင်တို့မေ့နေတာမဟုတ်လား ”
ကျွန်တော့်အသံက လန်းဆန်းတက်ကြွနေသော်လည်း တစ်ဖက်ဖုန်းအသံက လေးပင်လွန်းလှသည်ဟု ထင်သည်။
“အင် ..ဖုန်းဘဲမြည်လို့သာ ကိုင်လိုက်ရတာ အိပ်ချင်နေတုန်းပဲ။ ညက အိပ်ရေးပျက်တယ်ဟ။ အဖေ့ကို ထထကြည့်ရတာ၊ အိုက်တယ်ဆိုပြီး စွပ်ကျယ် ချိုင်းပြတ်နဲ့နေ၊ ပန်ကာတွေ ထဖွင့်နဲ့ လုပ်ချင်လုပ်တာ။ငါတို့ သတိတစ်ချက် လစ်တာနဲ့ နောက်နေ့ အဖေ အအေးမိရော။ မနည်းချော့မော့ပြီး တီရှပ်ဝတ်ပေး၊ ပန်ကာ Speed လျှော့ပေးနဲ့ အိပ်ပျော်တဲ့အထိ စောင့်လုပ်ရတာ။””
ဟုတ်ပါလိမ့်မည်။ အဖေက ၈၆ နှစ်ထဲ ရောက်လာပြီ။ ကလေးငယ်လေး တစ်ယောက်လို ပန်းပွင့်လေး တစ်ပွင့်လို ဖြစ်သွားပြီ။ အထိအခိုက် မခံနိုင်တော့။ သို့သော်လည်း စိတ်ကတော့ဖြင့် တစ်ပြားသားမှ မလျော့၊ သူဖြစ်ချင်တာ ခံစားရတာကို အထိန်းအကွပ်မရှိ ထုတ်ဖော် ပြသချင်စိတ်က လွန်လွန်ကဲကဲ ရှိသည်ဟု ထင်သည်။ တကယ်တမ်းကျတော့ အဖေ့မှာ ဘာရောဂါမှ ကြီးကြီးမားမားမရှိ၊ အမေ့တုန်းကသာ အသည်းကင်ဆာနှင့် ၈၅ နှစ် မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ လူ့သက်တမ်းစေ့ နေနိုင်ခဲ့သော်လည်း ၁ နှစ်ခန့်အတွင်းမှာ အမေဝေဒနာကို အလူးအလဲ ခံခဲ့ရသည်။
“သူ့ဖာသာသူလည်း ရောဂါနာမည် တပ်တယ်ဟ။ အသက်ကြီးတော့လည်း နည်းနည်းပါးပါး ဖြစ်တာပေါ့ အဖေရယ်လို့ မမသန်းကပြောမိတာ နင်တို့ငါ့ကိုသေတော့မယ့် အဖိုးကြီးဆိုပြီး ပြောတာမဟုတ်လား ဘာညာ ပြောပြီး ပေါက်ကွဲတော့တာ …။ အဖေနဲ့ပြောဖို့စကားလုံးတွေကို တော်တော် စဉ်းစားယူရတယ်။ စာရေးဆရာ နင့်ထက်တောင် ပိုကျွမ်းနေပြီ ဟဲဟဲ ”
ညီမလေးအရယ်က သိပ်တော့ အသက်မ၀င်ဟု ထင်သည်။
“နေအုံး …မိဆွေကလည်း ပြောအုံးမယ်တဲ့”
ညီမလေးကဖုန်းကို တူမလေးတစ်ယောက်ထံ လက်လွှဲလိုက်ပြန်သည်။
“လေးလေး …ဘဘက အထီးကျန်သလို ခံစားနေရတာ အားလုံးက သူ့အလုပ်နဲ့သူဆိုတော့ ဘဘနဲ့က သိပ်စကားမပြောဖြစ်ဘူး။ အဲဒါသူ့ကို ပယ်ထားတယ် ငါကအိုပယ် ဖြစ်နေပါပြီဆိုပြီး သမီးတို့ကို ပြောတာ အခုတော့ သမီးတို့လည်း ဘဘကို စကားမရှိ စကားရှာပြော ဟာသတွေလုပ်နဲ့ဆိုတော့ ရယ်ရယ်ပြုံးပြုံး ဖြစ်သွားပြန်ရော”
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးရယ်…လေးလေးတို့က အဝေးကနေ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်လေး ကန်တော့တာနဲ့ပဲ ပြီးသွားတာ၊ သမီးတို့ကသာ ခြေဆုပ်လက်နယ် ပြုစု စောင့်ရှောက်တာလေ၊ လေးလေးတို့ လစဉ်ကန်တော့တာထက် သမီးတို့က ကုသိုလ်ရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်။ အဖိုးအဖွား၊ အမိအဖ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုစောင့်ရှောက်ရတဲ့ မြတ်သောစိတ်ကြောင့် ဘ၀အခြေလှကြမှာပါ။””
ကျွန်တော့်စကားက တူမလေးရင်သို့ စူးဖောက်ဝင်ရောက်ဟန် တူသည်။ တစ်ဖက် ဖုန်းသံက တော်တော်နဲ့ ထွက်မလာ၊ ဖုန်းကျသွားသည် အထင်ဖြင့် ဟဲလို ဆိုတော့
“ကြားတယ် လေးလေး။ လေးလေးလည်း ၀န်ထမ်းဘ၀ လစာ မလောက်မငတဲ့ ကြားထဲက ဘဘကို လစဉ်ကန်တော့တာ သမီးတို့ ရတဲ့ ကုသိုလ်ေ လေးလေးလည်း ရမှာပါ၊ အပြန်အလှန် မျှဝေလိုက်တာပေါ့။ အိုကေ လေးလေး ဘဘအတွက် မပူနဲ့”
တူမလေးမိဆွေ ဖုန်းချသွားတော့ သက်ပြင်းမောလေး ချမိသွားသည်။ အဖေ့မွေးနံထောင့် ကြာသပတေး ဂြိုဟ်မင်းရောက်လျှင်ဖြင့် ရေ ၈၆ ခွက် သပ္ပာယ်ရဦးမည်။နောက်နှစ် ၈၇ …နောက် ၉၀ ၊နောက် ၁၀၀ ကြုံချင်ပါသည်လေ။
အရှေ့ဘက် ဓာတ်လှေကားမှ ပြန်ဆင်းလာတော့ မိသားစု စုံညီနံနက်စာ စားဖို့စိတ်ကူးသည်။
“ကဲ မွေးနေ့အမှတ်တရ မုန့်ကျွေးမယ် ကြိုက်တဲ့ဆိုင်ပြော”
သားနဲ့သမီးက “ဖေဖေ့သဘော” ဟု ပြောချိန်မှာ ဇနီးသည်က ဂဏန်းပေါင်းစက်ကို စိတ်နှင့် နှိပ်နေပြီ ထင်သည်။
“မောနင်းစတားလောက်ပဲ ကောင်းပါတယ် သိပ်လည်း မဝေးဘူး အိမ်ကို လမ်းလျှောက်ပြန်လို့ ရတယ်”
နံနက်ခင်း ကန်တော်ကြီးပတ် လမ်းလျှောက်ပြန်သူတို့ နှင့် စည်ကားတတ်သော တိရစ္ဆာန်ရုံထောင့်က ဆိုင်၏ ကျယ်ဝန်း သပ်ရပ်မှုကို ကျွန်တော်ကလည်း သဘောကျနှစ်မြို့တာမို့ မောနင်းစတားကိုပဲ ရွေးချယ်ပြီး တက္ကစီတစ်စီး ငှားလျက် ရောက်သွားတော့သည်။
မြီးရှည်၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ၊ နန်းကြီးသုပ်၊ ပလာတာ၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည် စသဖြင့် တစ်ယောက်တစ်မျိုး မှာလျက် ကျွန်တော်တို့ စားပွဲဝိုင်းလေး စည်စည်ဝေေ၀ ဖြစ်သွားပါသည်။ စားသောက်စရာအစုံ ရောက်လာပြီး မြီးရှည် မုန့်ဖတ်များကို ၀ါးတူလေးဖြင့် ကျွန်တော်သမအောင် မွှေနေချိန်မှာ ဇနီးသည်က
“အကို..ဟိုမှာကြည့်စမ်း” ဆိုပြီး မေးကလေး ဆတ်ပြသည်။
အို…လှပသော၊ လင်းလက်သော၊ အရောင်အသွေးစုံသော ပန်းချီကားတစ်ချပ်ပါပဲ။ အသက် ၉၀ နီးပါးရှိ အမေအိုကြီးကို သားလုပ်သူက ပလာတာနှင့် ပဲလေးတို့ပြီး အမေကြီးပါးစပ်ဆီ အညင်အသာ ခွံကျွေး၊ အမေကြီးကလည်း ပြုံးပြုံးလေးနှင့် တမြုံ့မြုံ့၊ သားဖြစ်သူ ကမ်းပေးသည့် တစ်သျူးလေးကို နမ်းပြီးမှ ပါးစပ်ရှိ ပဲပြုပ်အစအနလေးတွေကို တို့သုတ်နေသည်။ ကျွန်တော် လက်ကိုင်ဖုန်း၏ မီနူးလေးကို နှိပ်ပြီး ကင်မရာဆက်တင်ကို ဖွင့်လိုက်သည်။
“အို… အကိုကလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်မလို့ မဟုတ်လား။ ခွင့်မတောင်းဘဲ ရိုက်လို့ ကောင်းပါ့မလား။ ဒီအတိုင်းလေး ကြည့်ကောင်းပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်မှ အမေကြီးတို့ သားသမီး ရှက်သွားပါဦးမယ်။”
ဇနီးသည် အပြောကြောင့် လက်ကိုင်ဖုန်းလေးကို မသိမသာ အိတ်ထဲ ပြန်ထည့်မိသည်။ သားနှင့်သမီးက ကျောပေးထားရာကနေ ခေါင်းလှည့်ကြည့်သည်။
“ကဲ .. အဲသလို ဖေဖေတို့မေမေတို့ အိုမင်းမစွမ်း ဖြစ်တဲ့အခါ မင်းတို့ ပြုစုမှာလား”
“ဟင် ဖေဖေကလည်း အဲ့သည့်အရွယ်ထိ နေချင်သေးလို့လား”
သားစကားကြောင့် ကျွန်တော် အထိတ်တလန့် ဖြစ်သွားသည်။ သားပြောသလို အဲသည့်အရွယ်ထိ ကျွန်တော်တို့ နေခွင့်သာသည့်အခါ နေချင်သေးတာပဲလား။ သတ္တ၀ါအားလုံးက မိမိ၏အသက်ကို ရနိုင်သလောက် ဆွဲဆန့်ချင်တာပဲ မဟုတ်လား။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Suicide လုပ်တာက လွဲရင်ပေါ့၊ ကျွန်တော့်မှာ မြီးရှည် ဆက်စားဖို့ အာရုံမရှိတော့ စဉ်းစားစရာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ။
“ဟုတ်ပါပြီ ..ဖေဖေတို့အဲသည့် အသက်အရွယ်ထိ မနေချင်သော်လည်း နေရပါပြီတဲ့ မင်းတို့ကရော မနေစေချင်ဘူးလား။ ဘာမှ မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ လူပိုကြီးလို့ မြင်ယောင်တာလားကွာ” ကျွန်တော့်အသံတွေက နည်းနည်း တိမ်ဝင်သွားသည်ဟု ထင်ပါသည်။
“နင်ကလည်းဟာ… ဘာတွေ ပြောမှန်းမသိဘူး။ ဖေဖေတို့ စိတ်မကောင်းအောင်” သမီးက သူ့မောင်ကို ခပ်အုပ်အုပ် ဆူသည်ကို ကျွန်တော် ကြားဖြစ်အောင် ကြားသည်။ သည်အချိန်မှာပဲ အမေကြီးတို့ သားအမိ စားသောက်ပြီး၍ ဆိုင်က ထွက်ဖို့ပြင်သည်။ အသက် ၆၀ ခန့် သားက အသက် ၉၀ ခန့် အမေကြီးကို တယုတယ ဖက်ပြီး ဖေးဖေးမမဖြင့် သူတို့၏ စူပါစလွန်းကားဖြူလေးထဲ ရောက်သွားတော့သည်။
“ဒါကလဲ ပိုက်ဆံရှိတာ၊ မရှိတာနဲ့ ဆိုင်လိမ့်မယ် ဖေဖေ။ တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စား မွေးထားတဲ့ သားသမီးတွေ အများကြီးနဲ့ ဖရိုဖရဲ ဖြစ်နေရင်တော့ အဲသလို လမ်းတောင် ကောင်းကောင်း မလျှောက်နိုင်တဲ့ အမေကြီးကို သားလုပ်သူကလည်း အပြည့်အ၀ လုပ်ပေးနိုင်မယ် မထင်ဘူး။ စိတ်ချ ဖေဖေ သားချမ်းသာရင်တော့ ဒီမြင်ကွင်းမျိုးက စာဖွဲ့စရာ မဟုတ်ပါဘူး”
“ဒါပဲ… သားယောက်ျားလေးတွေက မွေးရကျိုး မနပ်တာ”
ဇနီးသည်က သားဖြစ်သူ အဖြေကို ကျေနပ်ဟန်မတူ။ အထိုက်အလိုက် ဖြေတာကိုပဲ သဘောကျချင်ပုံ ရသည်။
“သားပြောတာလည်း ဟုတ်နေတာပဲကွ။ ဒါတွေ အားလုံးဟာ ဓနဥစ္စာချည်းပဲတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ မေတ္တာ အဲဒါကတော့ မရှိမဖြစ်ပါကို ပါမှရမယ်”
“ဟုတ်တာပေါ့ ဖေဖေရယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက အဓိကပါ၊ သူ့ကို Support လုပ်ပေးနိုင်ဖို့က ဓနဥစ္စာတော့ အထိုက်အလျောက် ကြွယ်ဝရမယ်။ မပူပါနဲ့ ဖေဖေ၊ မေမေတို့သာ အသက် ၉၀၊ ၁၀၀ ရောက်အောင်နေပေး”
သမီးက ရယ်ရယ်မောမော ပြောရင်းက လက်ကျန် ကော်ဖီခွက်ကို မော့နေသည်။
“အားလုံးက ကံတရားအတိုင်း ဖြစ်လာတာပါ။ ဓနဥစ္စာ ကြွယ်ဝတိုင်းလည်း မရဘူး၊ မေတ္တာတရားချည်းပဲလည်း မရဘူး၊ မျှော်လင့်တိုင်းလည်း မဖြစ်ဘူး၊ ကျွန်မကတော့ ဘာမှ ကြိုမတွေးဘူး။ ဘုရားမှာ ဆုတောင်းတာတောင်မှ အသက်ရှင်ခွင့် ရသခိုက် သောက အပူအပင်မရှိ ငြိမ်းအေးစွာ နေရပါလို၏လို့ ဆုတောင်းတာ”
မျက်ခုံးလေး ပင့်ပင့်ပြောသော ဇနီးသည် မျက်နှာကို ကျွန်တော် ငေးမောကြည့်နေမိသည်။ အိုမင်းမစွမ်း ဘ၀ကို ကျွန်တော် တွေးကြောက်သွားတာမလားဟုလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်းထုတ်နေမိပြန်ပါသည်။ သေချာတာကတော့ မနက်ဖြန်ဆို ကျွန်တော့်အသက် တစ်နှစ်တိုးသွားပြီလေ။
လခထုတ်ရက်တိုင်းမှာ အဖေ့ကို ကန်တော့သော ငွေကြေးအနည်းငယ်သည် လည်းကောင်း၊ ခြေဆုပ်လက်နယ်ဖြင့် ပြုစုယုယသည့် ညီမလေးများနှင့် တူမလေးများ၏ မေတ္တာသည် လည်းကောင်း၊ အိုမင်းမစွမ်းတော့ပြီ ဖြစ်သော ဖခင်ကြီးထံ သက်ရောက်ပါစေသတည်း။ ထို့အပြင် လစဉ်ကန်တော့နိုင်သော ဥစ္စာငွေကြေးနှင့် ညီမလေး၊ တူမလေးများ၏ မေတ္တာသည်လည်း မခန်းမခြောက် ရှိပါစေသတည်း။ ရွှေတိဂုံမှာ မတောင်းခဲ့သောဆုကို အိမ်ဦးခန်းဘုရားမှာ အခုတော့ ကျွန်တော် မမေ့မလျော့ နေ့စဉ် တောင်းရတော့မှာပါလေ။
ကျွန်တော့်အိမ်မှာ တီဗွီဂိမ်းဆိုင်လေး ဖွင့်ထားပါသည်။ ဂိမ်းစက် ၇ လုံး၊ ၂၁ လက်မတီဗီံ ၇ လုံးမို့ ကျွန်တော်အိမ် ကျဉ်းကျဉ်းလေး၏ အဖီလေးမှာ ပြည့်ကျပ်လို့ နေပါသည်။
ဂိမ်းကစားသူ လောက်နှင့်တော့ အနေတော်လေး ဖြစ်သော်လည်း ဂိမ်းကစားသူ တစ်ယောက် နံဘေးက ၀င်အားပေးသူ လေး၊ ငါးယောက်ဆိုတော့ ကျွန်တော့် ဂိမ်းဆိုင်လေးက ပြည့်ကျပ် ဆူညံ နေတတ်ပါသည်။ ပလတ်စတစ် ထိုင်ခုံလေးတွေ အများကြီး ချထားသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ ဂိမ်းကစားမည့်သူ အတွက် ထိုင်ခုံက မရှိ။ အားပေးသူ တွေက ထိုင်ခုံ အပိုင်စီး ထားကြသည်။ ကျွန်တော့်မှာ အော်ရ၊ ပြောရနှင့် အဆဲ မပါမိအောင်ပင် ဂရုစိုက် ထိန်းနေ ရသည်။ ဂိမ်းကစားသည့် ကလေးနားမှာ အဖော်လိုက်လာပြီး အားပေး တတ်သည့် အုပ်စုကတော့ တကယ့် ဆရာကြီးတွေပါပဲ။ “X နှိပ်လေ၊ လေးထောင့် နှစ်ချက် ဆက်နှိပ်ပြီးရင် Oနှိပ်၊ L1 R1 နဲ့ L2 R2 နှိပ် ပြီးရင် ဘုခလုတ်ကို လှည့်ပစ်လိုက် ” သူတို့မို့ ဖော်မြူလာတွေ အလွတ်ရနေ တတ်သည်။
ကိုယ်တိုင် ကစားသည့် ကလေးက မလုပ်တတ် မကိုင်တတ် ဖြစ်နေလျှင်တော့ ဟင်းန်ဒ်ဆက် လက်ကိုင် ခလုတ်ကို လုယူပြီး နှိပ်တတ်သည်။ ဒီလိုနှင့် ပိုက်ဆံ အကုန်အကျခံ ဂိမ်းကစားသည့် ကလေးက သူယူထားသည့် တစ်နာရီမှာ မိနစ်၄၀လာက်သာ ကစားရပြီး မိနစ် ၂၀ လောက်ကို “ဆရာကြီး”တွေက ကစား သွားတတ်ကြ ပါသည်။ ဂိမ်းဆိုင်လေး အကြောင်းကတော့ ပြောမည်ဆို အများကြီးပါ။ ဂိမ်းခွေတွေ အကြောင်း ပြောရမလား၊ ဂိမ်းကစားသည့် ကလေး၊ လူကြီးတွေ အကြောင်း ပြောရမလား။ စိတ်ဝင်စားစရာ ဇာတ်လမ်းတွေက အများကြီး ရှိလို့ နေပါသည်။
ဂိမ်းခွေတွေက အမျိုးမျိုး ရှိသည်။ ကလေးတွေ အကြိုက်ကတော့ စက်ဘီးပြိုင်တာ၊ ရမ်ဘိုဂျပု သေနတ်ပစ်တာ၊ ဘက်တ်မင်း၊ စပိုက်ဒါ မင်း၊ ကာတွန်းရုပ်လေးတွေနှင့် စပိုင်စတာတွေပါပဲ။ ၁၆၊ ၁၇ နှစ်နှင့် ၂၀ စွန်းစွန်းလေးတွေက ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနှင့် ဘောလုံး ကစားတာများ ပါသည်။ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ကစားမိလျှင် တော်တော်နှင့် မထနိုင်အောင် စွဲလမ်း ကြသည်။
ကျွန်တော်က ကစားချိန် တိုင်မာကို တီဗွီရီမုဒ်နှင့် ထည့်တာမို့ ကစားချိန် စေ့လျှင်တော့ တီဗွီက အော်တို ပိတ်သွား ပါသည်။ ဇာတ်လမ်းတွဲခွေ ကစားသူက ဆက်ကစား လိုလျှင် ငွေထပ်ဖြည့်၊ တီဗွီထပ်ဖွင့်၊ တိုင်မာချိန် ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ရှင်းရှင်းလေးပဲ ဖြစ်သည်။ မရှင်းတာက ဘောလုံး။
ဇော်သိန်းဝေနှင့် လှမိုးဦးတို့က ကျွန်တော့် ဂိမ်းဆိုင်လေးကို ၀င်ခလုတ်၊ ထွက်ခလုတ် လုပ်နေကြသူများ ဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ်ယောက် ပိုက်ဆံ ထုတ်ကစားတာ ကတော့ အင်မတန် ရှားပါသည်။ အဖော် လိုက်လာပြီး ကပ်ဆော့ နေသူများ ဖြစ်သည်။ နှစ်ယောက်လုံးက အသက် ၂၀ မပြည့်တတ်သေး။ ၁၀ တန်းကျ၊ ကျောင်း ဆက်မတက်၊ အလုပ်မရှိ ဝေလေလေ။ မိဘတွေ ကလည်း ပြည့်စုံသူတွေ မဟုတ်။ ၀န်ထမ်းရပ်ကွက် အိမ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ နေစရာလည်း မရှိတာမို့ သူငယ်ချင်းတွေနောက် တကောက်ကောက်လိုက်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင် (တိုက်မယ့်သူ မရှိလည်း ခပ်တည်တည်နှင့် မျက်နှာပြောင် ၀င်ထိုင်တတ်ပါသည်။) ဂိမ်းဆိုင်ဝင်လိုက်၊ ထွက်လိုက် လုပ်နှင့် အချိန်ဖြုန်း နေကြသူများ ဖြစ်သည်။
သည်နေ့ညနေ မှာတော့ ဇော်သိန်းဝေ၊ လှမိုးဦး နှစ်ယောက်တွဲ ကျွန်တော့် ဂိမ်းဆိုင်လေးသို့ ရောက်လာပြီး ဘောလုံးခွေ ကစားကြသည်။ ဇော်သိန်းဝေကပဲ ပိုက်ဆံ ထုတ်မှာလား၊ လှမိုးကပဲ ထုတ်မှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် နှစ်ယောက်စပ်တူ ကစားမှာလား ကျွန်တော့်မှာ ပဟေဠိ တစ်ပုဒ်ပင် ရလို့နေပါသည်။ ၂၀၀ ကျပ်ဖိုး မိနစ် ၅၀ ကျွန်တော် တီဗွီ တိုင်မာချိန် ပေးလိုက်သည်။
ညနေ ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ် ကတည်းက ဇော်သိန်းဝေတို့ ဂိမ်းကစားတာမို့ မိနစ် ၅၀ က ၅ နာရီ ၅ မိနစ်မှာ ပြည့်ပါမည်။ ကျွန်တော် တီဗွီစကရင်ကို လှမ်းကြည့်တော့ ဘောလုံး ပွဲက ဒုတိယပိုင်း ၃၀ မိနစ် ရှိနေပါပြီ။ သည်မှာတင်ပဲ သူ တို့နှစ်ယောက်၏ ၂၀၀ ဖိုး မိနစ် ၅၀ က ပြည့်သွားတာမို့ တီဗွီက ပိတ်သွားပါသည်။ နံရံထက်က နာရီလှမ်းကြည့်တော့ ၅ နာရီ ၅ မိနစ်ကွက်တိ။ ဘောလုံးပွဲက မပြီးသေးပါ။ ဇော်သိန်းဝေရဲ့အပြာရောင် ချဲလ်ဆီးက ၃ ဂိုး၊ လှမိုး ဦးရဲ့ အနီရောင်မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်က ၁ ဂိုး။
နှစ်ယောက်လုံး၏ အသံက တစ်ပြိုင်တည်း ထွက်လာသည်။ ကျွန်တော် ရီမုဒ်နှိပ်ပြီး တီဗွီပြန်ဖွင့်ပေး လိုက်ပါသည်။ ဂိမ်းမှာ ၄၅ မိနစ်က အပြင် ၁၀ မိနစ်ပဲကြာ တာမို့ ဂိမ်းထဲက ၁၅ မိနစ်က ၃ မိနစ်သာသာပဲကြာသည်။ ကျွန်တော် မတွန့်တိုပါ။ ဒါမျိုး သူတို့ မတောင်းဆိုလည်း ကျွန်တော့်ဘက်က တီဗွီ ပြန်ဖွင့်ပေးတတ်ပါ သည်။ ပြီးအောင် ကစားစေ ချင်တာပဲ ဖြစ်ပါသည်။
ဇော်သိန်းဝေတို့ ကစားနေသည့် တီဗွီစကရင်ကို ကျွန်တော် ပြန်လှမ်းကြည့် တော့ ပွဲက ၃ ဂိုး ၂ ဂိုး ဖြစ် နေပါပြီ။ ပွဲပြီးတော့မည့်Loss Time နောက်ဆုံး အချိန် ရောက်နေပါပြီ။ သည်မှာပဲ ချဲလ်ဆီး ဂိုးသမား ပီတာချက်က နောက်တန်း ကပ္ပတိန် ဂျွန်တယ်ရီကို လက်နဲ့ပစ်ပေး၊ ဂျွန်တယ်ရီက ဂိုးထဲဆွဲပြေးပြီး ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းလိုက် သည်။ သည်တော့ ပွဲက သရေ ဖြစ်သွားသည်။ ၃ ဂိုး ၃ ဂိုး။
ကျွန်တော် လွှတ်ခနဲ ပြောမည်ပြုပြီး စိတ်ကို ထိန်း လိုက်ပါသည်။ ဇော်သိန်းဝေက ကျွန်တော့်ဘက်လှည့် ကြည့်တော့ ကျွန်တော် မမြင် လိုက်သည့်ပုံစံဖြင့် အားကစား ဂျာနယ်တစ်စောင်ကို စိတ်ဝင် တစားဖတ်ချင်ယောင် ဆောင်နေလိုက်ပါသည်။ အချိန်ပို ပထမပိုင်း ဂိုးမသွင်းကြပါ။ ဒုတိယပိုင်း ၁၀မိနစ်မှာတော့ ဇော်သိန်းဝေ၏ ချဲလ်ဆီးတိုက် စစ်မှူး ဒရော့ဘာက ထောင့်ကန်ဘောမှ တစ်ဆင့် ခေါင်း တိုက် သွင်းသွားပါသည်။ ဇော်သိန်းဝေက သူ့ကစား သမား ဂိုးသွင်းလိုက်တာကို အနှေးပြကွက်နှင့် အကြိမ် ကြိမ်ပြန်ကြည့်သည်။
“တွေ့တယ် မဟုတ် လား၊ ငါ့ကောင် ခေါင်းတိုက်သွားတာ မင်းဂိုးသမား ဗန်ဒါဆား ငုတ်တုတ်မေ့သွားပြီ”
ဇော်သိန်းဝေ ကြွားတာကို လှမိုးဦးက
“အေးပါ အေးပါ ငါ ပြန်ချေပြမယ်” ဟုပြောရင်း ပွဲပြန်စသည်။
အချိန်ပို ဒုတိယပိုင်း ၁၄ မိနစ်မှာတော့ လှမိုးဦးရဲ့ မန်ယူရှေ့တန်း ရွန်းနီဘောလုံး ရသွားပြီး ချဲလ်ဆီးဘက် ဆွဲပြေးသည်။ ချဲလ်ဆီးဘော လုံးကစားသမားတွေက ရပ်နေ သည်။ ကျွန်တော် ဇော်သိန်း ဝေ၏လက်ကို လှမ်းကြည့် တော့ ဂိမ်းခလုတ်မနှိပ် သည် အတိုင်း လွှတ်ထားသည်။ ရွန်းနီ ဂိုးသွင်းသွားပါသည်။ ပွဲက ၄ ဂိုး ၃ ဂိုး။
“တောက်... ကွာ... သရေဖြစ်သွားပြီ။ မင်း ကံကောင်းသွားတယ်နော်”
ဇော်သိန်းဝေ အပြောကို လှမိုးဦးက တဟဲဟဲရယ်နေ သည်။ ရွန်းနီ ဂိုးသွင်းတာကို အနှေးပြကွက်နှင့် အကြိမ် ကြိမ် ပြန်ကြည့်ပြန်သည်။ “လုပ်လိုက်ကွ” ဟု ကျွန်တော့် စိတ်ကတော့ အောင့်သက်သက်နှင့် အသံမထွက် အော်ဟစ်နေပါသည်။ သူတို့ ပင်နယ်တီ ၅ လုံး စီကန်ကြသည်။ ၃ ဂိုးစီ သရေဖြစ်သွားပြန်သည်။ ၁ ဂိုးစီကန်ကြပြန် သည်။ ၃ ခါလောက် သရေ ဖြစ်ပြီးမှာတော့ ချဲလ်ဆီးရဲ့ ဘယ်လက်တီ ဘေးကန်သွား တာမို့ ပွဲက ပြီးသွားပါသည်။
ဇော်သိန်းဝေတို့ နှစ်ယောက် တီဗွီရှေ့က မထချင် ထချင်နှင့် ထသည်။ ဂိမ်းဖိုး ငွေ ၂၀၀ ကျပ်တန် နွမ်းနွမ်းကို လှမိုးဦးက ဂျင်းဘောင်းဘီ နောက်အိတ်ကပ်ထဲက ခက် ခက်ခဲခဲ ဆွဲထုတ်ပေးသည်။
“တစ်ပွဲလောက်” က တော့ အချိန်ပို ၆ မိနစ်ရယ်၊ ဂိုးသွင်းတာတွေ ပြန်ကြည့်တာရယ်၊ ပင်နယ်တီအကြိမ်ကြိမ် သွင်းတာရယ် ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ နာရီဝက်ခန့် စွန်းထွက် သွားသည်။ နာရီဝက်ခန့် ပိုပြီး အချောင်နှိုက် ကစား သွားတာ...။
ဇော်သိန်းဝေတို့ ပြန်သွားတော့ ကျွန်တော့်မှာ တနုံ့ နုံ့ခံစားရဆဲ...။
သူတို့ နှစ်ယောက်ကတော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ တော်တော်လည်သည်ဟု ထင်မှတ် နိုင်ပါသည်။ သူတို့ လည်ကြပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်ကလည်း မအပါ။ ဒါကို ကျွန်တော် ထုတ်ပြချင်သည်။ ထုတ်ပြရပါလိမ့်မည်။
ခုတော့ ကျွန်တော့်ဂိမ်း ရုံလေး၏နံရံမှာ
“ခလုတ်များကို ကြမ်းတမ်းစွာ မကိုင်ရ”
“ထိုင်ခုံများကို မရွှေ့ပါ နှင့်” ဆိုသည့် စာတန်းတွေ ဘေးမှာ
“အချိန်အတိအကျ သတ်မှတ်ပါသည်။ တစ်ပွဲ မပေးပါ” ဆိုသည့် စာတန်း လေးတစ်ခု ထပ်တိုးလို့ နေသည်လေ...။
ငယ်ငယ်က ကျောင်းသင်ခန်းစာမှာ သင်ခဲ့ရသော ပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ်ကို သတိရသည်။
ဆင်၊ မျောက်၊ ခါ ဆိုသော တိရစ္ဆာန်လေး ၃ ကောင်နှင့် ညောင်ပင် အကြောင်းပင် ဖြစ်သည်။ သူတို့ ၃ ကောင်၏ အသက်ကို ညောင်ပင်နှင့် ဆက်စပ်ပြီး တွက်ချက်တော့ ခါက အသက် အကြီးဆုံး ဖြစ်၍ မျောက်နှင့် ဆင်က ရိုသေ လေးစားစွာ ဆက်ဆံကြရသည်။ ကြီးသူကို ရိုသေရမည့် ပုံပြင်လေးဟု ရေးရေး မှတ်မိသည်။
ခါငှက်ကလေးက တစ်နေရာမှ ညောင်သီးစားပြီး ညောင်ပင် ပေါက်လာသဖြင့် ညောင်ပင် ဖြစ်တည် လာပြီးမှ မွေးသောဆင်၊ မျောက်တို့က ခါထက်ငယ်သည့် အကြောင်း၊ ပုံပြင် သင်ခန်းစာကတော့ ကြီးသူကို ရိုသေရန် အကြောင်း အဓိက ဖြစ်သော်လည်း ယခုအချိန် သူ့အတွေးက ညောင်သီးစားပြီး မစင်စွန့်သည့် ခါ အပါအ၀င် ငှက်တချို့ကြောင့် ညောင်ပင်များ ပွားများလာသည့် အကြောင်းကို တွေးနေမိသည်။
ညောင်ပင်ဆိုသည်ကလည်း မည်သည့် အခါမှ မခြောက်မသွေ့၊ ညောင်ရိပ်က အမြဲတမ်း အေးမြပြီး ငှက်ကျေးတို့၏ တွန်ကျူးသံဖြင့် နာပျော်ဖွယ် ကောင်းသလို အကာလည မိုက်မိုက်မှာတော့ ညောင်ရွက်တို့ လေတိုးသံက အားငယ်တတ်သူ၊ အစွဲအလမ်း ရှိသူ တချို့အတွက်တော့ ထိတ်လန့် ချောက်ချားဖွယ် နေရာဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်နေပါမည်။ သူကတော့ ဗောဓိညောင်၊ ညောင်ချဉ်၊ ညောင်မုတ်ဆိတ်၊ ညောင်သပြေ၊ ညောင်ပိန္နဲ၊ ညောင်လမ်း၊ ညောင်သပြေတို့လောက်သာ ကြားဖူးနားဝရှိသည်။ ညောင်ကိုင်းကြီးကနေ ကိုင်းထောက်မြစ်များ တဖွားဖွား ကျနေသည့် အပင်ကို ညောင်မုတ် ဆိတ်ဆိုသည် လောက်သာသိပြီး ကျန်ညောင်ပင်များကိုတော့ မှန်အောင် မခွဲခြားတတ်။ သူအလည်အပတ် ရောက်ခဲ့ဖူးသော ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ပင်းတယလိုဏ်ဂူ အနီးနှင့် မွေတော် ကက္ကူဘုရားက ညောင်ပင်ကြီးများ၏ အံ့မခန်း ကြီးမား ခံ့ထည်ပုံကတော့ ပန်းချီဆရာတွေ လက်စွမ်းပြချင်ဖွယ် ကောင်းလှသည်ဟု ထင်သည်။
ဓာတ်ပုံ ဆရာများ၊ ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးသူများ အတွက်လည်း အလင်းအမှောင်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အနီး အဝေး စသည့် သီအိုရီ အခြေခံများ ပြည့်နေသော အပင်ကြီးများပင် ဖြစ်ပါသည်။ ရှေးမဆွ ပဝေသဏီက အမြော်အမြင် ကြီးမားသော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများက စိုက်ပျိုးစောင့်ရှောက်ခဲ့လေသလော။
သို့တည်းမဟုတ် ပုံပြင်ထဲက ခါငှက်ကဲ့သို့သော ငှက်များ မစင်စွန့်ရာမှ ပေါက်ရောက်ခဲ့လေသလား။ ဒေသန္တရ ရာဇ၀င် တူးဆွသူတို့မှသာ သိနိုင်မည်ထင်သည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်နေစေလေ ညောင်ပင်ကြီးများ သူ့ချည်းသီးသန့် တည်ရှိနေလျှင်တော့ လွန်စွာ ကျက်သရေရှိ ခံ့ညားပြီး ဘုရားရိပ်၊ ကျောင်းရိပ်များမှာတော့ ဂြိုဟ်ပြေနံပြေ ဘုရားရုပ်တုတို့ ၀န်းရံလျက် ဆီမီး၊ ရေသပ္ပာယ် ရသည့် အထွတ်အထိပ် ရောက်သည်ဟု သူက မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပီပီ ညောင်ပင်များ ပျိုးထောင်ပြီး ဗုဒ္ဓ၏ အရိပ်အငွေ့တို့ကို လွှမ်းခြုံစေသည်။ ကဆုန်လပြည့်နေ့ ဗုဒ္ဓနေ့တွင်မူ ညောင်ရေ သွန်းကြသည်မှာ မြို့ရွာအနှံ့ တစ်နံတစ်လျား စည်ကားလွန်းလှသည်။ ညောင်ပင်ကို အရေးတယူ ထားရမှန်း၊ မဖွယ်မရာ မပြုရမှန်း ငယ်စဉ်ကတည်းက အစွဲအလမ်း ကြီးခဲ့သူ သူ့အတွက် အဆောက်အဦတွေအပေါ် ပေါက်ရောက်နေသော ညောင်ပင်နှင့် အခြားအပင်ကို ၀ါးမျို ကြီးထွားနေသော ညောင်ပင်များကိုတော့ စိတ်အချဉ် ပေါက်နေမိသည်။ အဆောက်အဦတွေ အပေါ် မည်သူကမှ ညောင်ပင် တက်စိုက်မှာလည်း မဟုတ်၊ ပုံပြင်ထဲက ခါငှက်ကဲ့သို့ မျိုးဆက်ပွား ကြားခံကိုယ် စားလှယ်ကြောင့်သာ ဖြစ်လိမ့်မည်။
သူတို့ မြို့ပြ အင်ဂျင်နီယာ ဌာနမှာ သံလမ်း၊ လုပ်ငန်း၊ တံတားဆိုသည့် ဌာနခွဲ ၃ ခုအနက်က သူက လုပ်ငန်း ဌာန၏ ကြီးကြပ်ရေးမှူးအဆင့် ဖြစ်သည်။ ပြောရလျှင်တော့ သူ့ဌာနခွဲ လေးတွင် သူက အကြီးဆုံး ရာထူးပင် ဖြစ်ပါသည်။ မီးရထား နယ်မြေအတွင်း အဆောက်အဦ ဆောက်ခြင်း၊ ဆေးသုတ် ခြင်း၊ အဆောက်အဦ၊ သံလမ်း၊ တံတားတို့နှင့် မလွတ်ကင်းသည့် သစ်ပင်များ ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းရန် တာဝန်တို့ သည် သူတို့ဌာနခွဲ၏ တာဝန်ပင် ဖြစ်သည်။ သူကတော့ သစ်တစ်ပင် ဖြစ်တည်လာရန် ခက်ခဲသည်ကို နားလည် ထားသူပီပီ မဖြစ်သာလွန်းမှသာ သစ်ပင် ခုတ်လှဲစေသူ ဖြစ်ပါသည်။ အဆောက်အဦတွေပေါ်မှာ ပေါက်ရောက် ရှင်သန်နေသည့် ညောင်ပင်များကိုတော့ ထိန်းသိမ်း ထားရမည့် သစ်ပင်များ မဟုတ်သည်ကို သူတွေးသလို သူ့တိုင်း အင်ဂျင်နီယာကလည်း တွေးဆပြီးသား ဖြစ်နေပုံ ရသည်။
“ကိုစောရေ၊ ခင်ဗျား လုပ်ငန်းအဖွဲ့ လမ်းနဲ့ မလွတ်တဲ့ သစ်ပင် သစ်ကိုင်းတွေ ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းလိုက်တာ တော်တော်လေး အဆင်ပြေသွား တယ်။ ဌာနပိုင် အဆောက်အဦ တချို့မှာတော့ ညောင်ပင်လေး တွေ တွေ့နေရသေးတယ်ဗျ၊ တချို့ တော်တော် ကြီးနေပြီ။ မိုးမကျခင် အမြန် ဆုံး ရှင်းလင်းလိုက်ပါဗျာ”
တိုင်းအင်ဂျင်နီယာ ညွှန်ကြားသော အခါ သူ့လုပ်ငန်း ဧရိယာထဲတွင် ရှိသည့် အဆောက်အဦကြီးတွေကို အတွေးဖြင့် မြင်ယောင်ကြည့်သည်။ သူ့လက်ထောက် လုပ်ငန်းကြပ်တို့ကို ကွင်းဆင်း ခိုင်းပြီး စာရင်း ကောက်ယူရန် ဆက်လက် ညွှန်ကြားရမည်။
ကျော်လွင်နှင့် တင့်လွင်ထွန်း နှစ်ယောက်ကို တာဝန် ပေးရုံမျှနှင့်ပင် သည်ကိစ္စက အလွယ်တကူ ပြီးစီးသွားပါလိမ့်မည်။ ယခင် နှစ်များတုန်းက အပင်ပေါက်လေးများ ဆွဲနုတ် ရှင်းလင်းပြီး အတန်အသင့် အရွယ်ရနေသည့် အပင်များကိုတော့ အရင်းက ခုတ်ဖြတ် ပေးခဲ့ဖူးသည်။ ရှင်သန့် ဖွံ့ဖြိုးမြန်သော အပင်မျိုးနွယ်ကြောင့်လား မသိ၊ အပင်တို့က ပြန်လည်ထမြောက် အရွက်တဝေေ၀ လေနှင့်အတူ ယိမ်းက၊ တစ်စ တစ်စ ကြီးမြောက်ပြန်ချေပြီ။
ကျော်လွင်နှင့် တင့်လွင်ထွန်း လုပ်ငန်းကြပ် နှစ်ယောက် ကွင်းဆင်းစာရင်း ကောက်ပြီး တင်ပြလာတော့ အဆောက်အဦတွေပေါ်တွင် ကပ်ရပ် ပေါက်နေသော သစ်ပင် အရေအတွက်က အတော်များသည်။ အချို့ တော်တော်ပင် ကြီးနေပြီ။ ကျော်လွင်၏ ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာ စခရင်ပေါ်တွင် တွေ့ရသည်ကိုက အူယားချင်စရာ။
“ဆရာရယ်၊ တချို့အိမ် တွေက အလွယ်တကူ ဆွဲနုတ်၊ ခုတ်ဖြတ် လိုက်ရင်ရတယ်။ အဲဒါ အိမ်ရှင်တွေက ညောင်ပင်မို့ မခုတ်ရဲဘူးတဲ့လေ”
တင့်လွင်ထွန်းက မချင့်မရဲ ဖြစ်နေပုံ ရသည်။
“တို့ လူမျိုးက ညောင်ပင်ကို အထွတ်အမြတ်ထားရာ အပင်အဖြစ် သတ်မှတ်တာ ဆိုတော့ မလုပ်ရဲ၊ မကိုင်ရဲ ကြဘူးပေါ့ကွာ၊ ၀န်ထမ်းကတော့ ရှောင်လွှဲလို့မှ မရတာ”
“ဒါကြောင့် ဟိုတုန်းက သစ်ပင်ခုတ်ရင် ဘယ်သူ့ အမိန့်လို့ ပြောပြီး ခုတ်တာ နေမှာနော်။ ဆရာကော အယူရှိလား”
ကျော်လွင်၏ အမေးကို ဖြေရန် သူ တွေခနဲ ဖြစ်သွားသည်။ သစ်ပင်ကြီးများတွင် အစောင့်အရှောက် ရှိသည် မရှိသည်တော့ မသိ။ သစ်ပင်ကြီးကြီးမှာ နတ်ရုပ်ပုံတော်၊ နတ်စင်ကလေးများ ရောက် လာသည်ကိုတော့ သူက သဘောကျချင်ချင်။ အမှိုက် အညစ်အကြေး မရှိ၊ သစ်ပင်ခုတ်လှဲရန် စိတ်မကူးရဲ။ ထို့ ကြောင့် သက်ရင့်သစ်ပင်ကြီးများ လွတ်ကင်း ချမ်းသာရာ ရသွားသည်ကို ကျေနပ်သည်။ သို့မဟုတ်လျှင် ချိန်းဆောဆိုသည့် လက်ကိုင်လွှသွားအောက်မှာ သစ်ပင်ကြီးတို့ တုံးခနဲ လဲကျကုန်မည်။ ဤ သည်ကလည်း မြို့ထဲရွာထဲရှိ သစ်ပင်ကြီးမျှသာ ကျန်ကောင်းကျန်မည်။ တောထဲက သစ်ပင်ကြီးများကတော့ မည်သည့် အစောင့်အရှောက်မှ မရှိတော့။ လောင်စာထင်း အဖြစ် ခုတ်လှဲခံရသော သစ်ပင်များနှင့် မှောင်ခို ခိုးထုတ် ခံရသော သစ်ပင်များခမျာ ဥပဒေမဲ့သူများထံ အညှာအတာကင်းမဲ့စွာ လည်စင်း ပေးခံလိုက်ရတော့သည်။ သစ်ပင်များ ပါးလျားလာတော့ ဂေဟစနစ်က ပရမ်းပတာဖြစ်၊ ရာသီဥတု ဖောက်လှဲ ဖောက်ပြန်ဖြစ်၊ မိုးခေါင်ရေ ရှား၊ မြေဆီသြဇာဆုံးရှုံး၊ သူ့ အတွေးများကား မဆုံးနိုင်တော့။
“ထားပါကွာ။ ငါတို့က အဆောက်အဦတွေကို ထိခိုက် စေမယ့် အပင်ပေါက်တွေကို ရှင်းလင်းတာပဲ၊ ကောင်းတာ လုပ်တာမို့လို့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ကွာ”
“မစိုးရိမ်ပါဘူး ဆရာရယ်၊ ကျွန်တော် စဉ်းစား နေတာက အသီး၊ အစေ့ သေး သလောက် အပင်ကျတော့ ဟဲဗီးကြီး ဖြစ်လာတာကို အဲဒါ ကျွန်တော် ငယ်ငယ် ကတည်းက တွေးပြီးအံ့သြနေ တာ၊ အသီးအစေ့ ကြီးကြီး သာဆို ဘယ်လိုများနေမလဲ မသိဘူးနော်”
ကျော်လွင် ပေါက် ပေါက်ရှာရှာ တွေးတော့ သူ ပြုံးမိသွားသည်။ အပင်ကြီးတိုင်း အသီး၊ အစေ့ ကြီး သလော။ အသီး၊ အစေ့ကြီးပြီး အပင်သေးတာကော ရှိသလော။ သူ့အတွေးက စုန်ချည်ဆန်ချည် ဖြစ်သွားပြန် ပြီ။ အပင်တို့၏ ဖြစ်တည်မှုများက လေ့လာမည်ဆိုလျှင် ကုန်နိုင်မည်လည်း မဟုတ်။ ရုက္ခဗေဒကို သူက အထက်တန်းကျောင်းသား ဘ၀တုန်း ကသာ နည်းနည်း တီးမိ ခေါက်မိ သင်ခဲ့ရရုံသာ။
“ဒါကြောင့်လည်း ညောင်စေ့လောက် လှူပြီး ညောင်ပင်ကြီးလောက် ကုသိုလ် ရနိုင်တယ် ဆိုပြီး အလှူခံ မဏ္ဍပ်တွေမှာ အော်နေတာပေါ့ကွ၊ ညောင်ပင်ကြီးလောက် လှူပြီး ညောင်စေ့ လောက်တောင် ကုသိုလ် မရတာလည်း ရှိချင် ရှိမှာပေါ့ကွာ”
“ညောင်သီးလည်းစား လေးညှို့သံလည်း နားထောင် ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေကို ပြောတာနေမှာနော် ဆရာ”
“တော်... တော်၊ ဆက်သွားရင် ညောင်မြစ်တူး ပုပ်သင်ဥပေါ်တွေ ဘာတွေ ရောက်ကုန်ဦးမယ်”
တင့်လွင်ထွန်းနှင့် ကျော်လွင်တို့ နှစ်ယောက်၏ စကားပုံတွေသာ ဆက်တွေး အဓိပ္ပာယ်ဖော် ဥပမာတွေ ဆောင်ပြလျှင် သူတို့ ဆရာ တပည့်များ ရုံးဆင်းလိုက်ရမည် မထင်။
သည်ကုန်ရုံကြီးက ရထားလမ်း စဖောက်ကတည်းက ရှိခဲ့သည့် အဆောက်အဦပင် ဖြစ်သည်။ နှစ်ကာလများ တွက်ကြည့်လျှင်တော့ နှစ်တစ်ရာကျော်ဘက်သို့ ချဉ်းကပ်လာပြီဖြစ်၍ ရှေးဟောင်း အဆောက်အဦ အဖြစ် သတ်မှတ်၍ ရနိုင်သည်။ ဘူတာက နောက်မှ ပြန်ဆောက် ထားသည့်အတွက် သစ်လွင်ဆဲဖြစ်သော်လည်း ကုန်ရုံကြီး၏ ထည်ဝါမှုကိုတော့ မမီ။ စစ်ပြန် ဂျပန်ကြီး တစ်ယောက်သည် ကုန်ရုံကြီးရှေ့မှာ ဓာတ်ပုံတွေ တဖျပ်ဖျပ် အရိုက်ခံပြီး စစ်ကာလတုန်းက သူတို့တပ်ဖွဲ့ နားခိုဖူးကြောင်း၊ သူတို့အတွက် ကွန်းခိုရာ ဖြစ်ခဲ့ဖူး၍ မှတ်မှတ်ရရ လာကြည့်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ သည်လို ရှေးဟောင်း အဆောက်အဦများကို မဖြိုမဖျက် ထိန်းသိမ်းထားသည့် အတွက် တာဝန်ရှိ သူအားလုံးကို ကျေးဇူး တင်ပါကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်ဟု ကုန်ရုံကြီးဘေးရှိ ၀န်ထမ်း လိုင်းခန်းနေသူ တချို့ ပါးစပ် ရာဇ၀င် ခင်းပြတော့ သူမအံ့သြ။ အုတ်ချပ်နီနီရဲ နံရံတွေမှာ ကပ်ငြိနေသော၊ ရေညှိတွေနှင့် ရှုပ်ထွေး ပတ်နွယ်နေသော နွယ်ပင်တွေကိုသာ သူက ငေး ကြည့်နေမိသည်။ အုတ်ကြွပ် မိုးက မူလအရောင် မရှိတော့။ ရေညှိများဖြင့် အစိမ်းတောက်တောက် အရောင်ပေါက်နေသည်။ ဘေးနံရံတွေမှာ ပေါက်နေသော ညောင်ပင်လေး များကို အလွယ်တကူ ရှင်းနိုင်မှာ ဖြစ်သော်လည်း နောက်ကျောဘက် နံရံရှိ အပင်ကတော့ အတော့်ကို ကြီးရင့် နေပြီ။ မည်သည့် မြေဆီ သြဇာအာဟာရ ရယူပြီး ရှင်သန် ဖြစ်ထွန်းလာသနည်း။ သူ့ တပည့်တွေ လက်ချက်နှင့် မကြာခင် ရှင်းလင်းသွားမှာကိုတော့ သူ့ဘက်က အပြည့်အ၀ ယုံကြည်နေမိသည်။
ထင်သည့်အတိုင်းပင် မွန်းတည့်စမှာ အနောက်ဘက် အပင်က လွဲပြီး ဘေးနံရံ၊ ခေါင်မိုးဆီက ရေညှိနှင့် နွယ်ပင် အရှုပ်အထွေး ညောင်ပင်ပေါက်တို့ ရှင်းလင်းသွားခဲ့ပြီ။ အဆောက်အဦ၏ မူလ အရောင်အသွေးက ထင်းလို့လာသည်။
အလုပ်သမား ခေါင်းဆောင်ဝကြီးက အုတ်နံရံပေါ် ထောင်ထားသော လှေကားထက်ကနေ သူ့အလုပ်ကြပ် ကျော်လွင်ကို လက်ဟန်ပါပြ ပြောတော့ ကျော်လွင်က လက်မထောင်ပြ စိတ်ချ အဓိပ္ပာယ်ရ သင်္ကေတ ပြန်ပြလိုက်သည်။ သူ့အလုပ်သမား အဖွဲ့က အထက်အမြင့်များမှာ တက်ရောက် လုပ်ကိုင်ရ သည်ကြောင့် လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း အရက်သောက်ခြင်းကို သူ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်တားမြစ်ထား သော်လည်း အလုပ်သိမ်းပြီဆိုလျှင်တော့ ခွင့်လွှတ်လိုက် ရသည်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုအတွက် ဖြေဆည်ရာအဖြစ် အသုံးချသည့်အပေါ် နားလည်ပေးနိုင်ရန် သူ့ဘက်က ၀န်မလေးပေ။
ကုန်ရုံကြီး အနောက် ဘက်နံရံရှိ ညောင်ပင်ကို ကိုင်းများ ခုတ်ဖြတ်ပြီး ပင်စည်အရင်းပိုင်းကို ရဲတင်းထက် ထက်ဖြင့် ဆယ်ချက်မျှ ခုတ် ပိုင်းလိုက်သည်နှင့် အပင်က မြေခသွားတော့သည်။ အုတ် နံရံမှာတော့ အပင်ငုတ်တို။ သူ ဤကဲ့သို့မူ မကြိုက်သေး၊ သိပ်မကြာခင်မှာ အခက် အလက်ပြန်ဝေ၊ အရွက်တွေ ဖားဖား ပြန်ဖြစ်လာဦးမည်။ အမြစ်ပါဖြတ်မှ ဖြစ်ပါမည်။
“ကျော်လွင်၊ ၀ကြီးကို ပြော၊ အမြစ်ပါ ဖြတ်တောက် လိုက်လို့”
သူ့အပြောကြောင့် ကျော်လွင်က ၀ကြီး တက်ရောက် နေသော လှေကားခြေရင်းသို့ အပြေးတစ်ပိုင်း ထွက်သွားသည်။ ၀ကြီးက အပင်ငုတ် တိုကို အားနှင့်ဆွဲ၊ အမြစ်နုတ်ဖို့ ကြိုးစားသည်မှာ မအောင် မမြင် ဖြစ်နေပုံရသည်။
“ဆရာကျော်၊ လက်နဲ့ ဆွဲလို့ မရဘူး။ ကြိုးနဲ့ အပင် ရင်းချည်ပြီး အောက်ကနေ လူအားနဲ့ ဆွဲချမှ အဆင်ပြေမယ်”
၀ကြီး စကားဆုံးတော့ ကျော်လွင်က လက်မ၀က်ခန့် ပလတ်စတစ်ကြိုးခွေ အစိမ်း ကြီး၏ အဖျားကို ၀ကြီးထံ ပစ်တင်လိုက်သည်။ ၀ကြီးက ညောင်ပင်ငုတ်တို အရင်းမှာ ကြိုးချည်ပြီး လှေကား အတိုင်း ပြန်ဆင်းလာသည်။
“တစ်... နှစ်... သုံး”
တိုင်မင်အော် အားထည့်ပြီး ၀ကြီး အပါအ၀င် အလုပ် သမား ၃ ယောက် ဆွဲအားမှာ အပင်ငုတ်က ညွတ်ရုံသာ ညွတ်ပြီး ပြုတ်မထွက်။
နောက်တစ်ကြိမ် တိုင်မင်အော် ဆွဲအချမှာတော့ အုတ်ခဲတစ်လုံးက ညောင် ငုတ် အထက်ပိုင်းဆီကနေ ၀ုန်းခနဲ ပြုတ်ကျလာပြီး နောက်ထပ် အုတ်ခဲ ၃၊ ၄ တုံး ဆက်ကျလာတော့ သူ “ဟိုး” ဟုအော်ပြီး ရပ်တန့်ခိုင်း လိုက်ရတော့သည်။
“ကဲ- ကျော်လွင်၊ အလုပ်သိမ်း လိုက်တော့ကွာ၊ မရတော့ဘူး။ အပင်ငုတ်ကို ဒီအတိုင်းပဲ ထားလိုက်၊ နည်းနည်း ကြီးလာတိုင်း လာခုတ်ရုံ ပဲ တို့တတ်နိုင်မယ်၊ သူ့ အမြစ်က အုတ်ရိုးအနှံ့ ပျံ့သွားပြီး ခိုင်ခံ့ အမြစ်တွယ်နေပြီလေ။ ဒါကို ရေဆုံး၊ မြေဆုံး အပြတ် ရှင်းရင်တော့ အုတ်တွေ အကုန်ပြိုပြီး အဆောက်အဦ ပါ ဗုန်းဗုန်း လဲသွားလိမ့်မယ်”
သူတို့အဖွဲ့ ပြန်လာ သောအခါ သူ့ရင်ထဲမှာ ခိုးလိုးခုလု ဖြစ်ပြီး တစ်စုံတစ်ခုကို မကျေမနပ် ဖြစ်နေမိ သည်။ ညောင်သီးစားပြီး မဆင်မခြင် မစင်စွန့်ခဲ့သော ပုံပြင်ထဲက ခါငှက်ကလေးကဲ့သို့သော ငှက်ကလေးများ ကိုလော၊ အပင်လေးငယ်ငယ်က မရှင်းလင်းခဲ့သည့် သူတို့၏ ပေါ့လျော့မှုကိုလော။
နှစ်ခုလုံးလည်း ဖြစ်နိုင် ပါသည်လေ။
ခုတော့ ကျွန်တော် အရိပ်လေးတစ်နေရာ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီ သင်္ဘောခေါင်မိုးပေါ်မျာ အရိပ်တစ်နေရာစာကို မလုမယက် ဘဲ ရဖို့ ဘယ်သူ စွမ်းဆောင်နိုင်ပါသလဲ၊ ကျွန်တော်ကတော့ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
မနေ့က ညနေပိုင်း ဆိုင်ပိတ်ချိန်လောက်မှာ လူကြုံက တစ်ဆင့်ဖိတ်စာလေးတစ်ဆောင် ကျွန်တော့်ဆီ ရောက်လာ ခဲ့လေသည်။
လူကြုံ က ကျွန်တော့်ဆိုင်ကို မရှာတတ်လို့ ဖိတ်စာချက်ချင်း လာမပို့ဖြစ်တာကို တောင်းပန်သည်။
ကျွန်တော် ကတော့ သိပ်မကျေနပ်ချင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တီဗွီ၊ ဗွီဒီယို၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ ပန်ကာတွေ ရောင်း တဲ့ မီနီမားကတ် လို ဆိုင်မျိုးတောင် မရှာတတ်ဘူး ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော့်ကို စော်ကား လိုက်တာ နဲ့ မထူးဟု ကျွန်တော်ထင်သည်။ ဒါပေမဲ့ လူကြုံစာလာပေးသူကို ဘာမျှ စောဒက မတက် လိုက်ပါ။ ကျေးဇူး အခါခါ ဆိုပြီး လက်ဖက်ရည်ပင် တိုက်လိုက်သေးသည်။
ဖိတ်စာ စာအိတ်လေးကို ဖွင့်ဖောက်လိုက်တော့ တက္ကသိုလ်တက်စဉ်က မခွဲ၊ တတွဲတွဲ နေခဲ့သော ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာလေး ဖြစ်နေသည်။ မင်္ဂလာဆောင် အခမ်းအနား ဖော်ပြရက် က မနက်ဖြန်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့မျာ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိအောင်ကို ယောက်ယက် ခတ်သွားသည်။
သူငယ်ချင်းရဲ့မြို့က ရထားမရောက်၊ ကားလမ်းလည်းပေါက်တာမဟုတ်၊ သင်္ဘောနဲ့ပဲ သွားရလိမ့်မည်။ ကားပေါက် လို့ကတော့ ကျွန်တော့် စပရင်တာလေးနဲ့ ညတွင်းချင်းတောင် သွားလိုက်ဦးမည်။ ခုတော့ သင်္ဘော နဲ့ သွားရပေပြီ။
ရေလမ်းခရီး ကို သိပ်သွားဖူးတာ မဟုတ်။ ကျောင်းတက်စသ်က သူငယ်ခင်ျး အတန်တန်ခေါ်၍ တစ်ခေါက် လိုက် သွားဖူးသည်။
ကုန်တွေ၊ လူတွေ ညပ်ခဲ ပြည့်သိပ်နေသော သဘောင်္(အခု ကျွန်တော်စီးသော သဘောင်္လောက်တော့ မဆိုး)ကို စီးခဲ့ရသည်။ ဒါတောင်မှ အပ်ပါးကမို့ သက်သောင့်သက်သာ ရှိခဲ့တာပါပဲ။ ကျွန်တော့် စိတ်အလို အရတော့ မသွားချင်။
ဆိုင်ကိုလည်း မန်နေဂျာနဲ့ လွှဲထားလိုက်ရမှာကို ၀န်လေးလှသည်။ ပြီးတော့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စွာ သွားရမည့် ခရီးမျိုးကိုလည်း အကြောက်ကြီးကြောက်သည်။
ဒါပေမဲ့မသွားလို့ ဖြစ်တာမဟုတ်။ သူငယ်ချင်းစာထဲမှာက သတို့သား လူပျိုရံအဖြစ် ကျွန်တော် လုပ်ရမည်တဲ့လေ၊ အားလုံး စီစဉ်ပြီးသားမို့ ကျွန်တော်မလာရင် သူမျက်နှာပျက်၊ အရှက်ကွဲရတော့မှာ ဆိုပြီး ချည်တုပ်ထားသေးသည်။ သွားရတာပါပဲ။
လူမှုရေး အစာမကြေမှာကို ကျွန်တော်ကြောက်တတ်သည်လေ။
ဆိုင်မန်နေဂျာကို လုပ်ထားကိုင်ထားရမှာတွေ အတန်တန်မှာ ဒက်ဒီ နဲ့ မာမီကို ခရီးထွက်ရမည့် ကိစ္စ ပြောပြီး စူပါကတ်လေးဖြင့် သင်္ဘောဆိပ် ပြေးခဲ့ရသည်။ ဆီးရောင်လေး၏ ပြေးရှိန်နဲ့ သဘောင်္ အထက်တန်း လက်မှ ရချင်စိတ်တို့ရဲ့ ပမာဏ တိုင်းတာနိုင်လျှင်တော့ ကျွန်တော့်စိတ်က နှိုင်းမရအောင် သာခဲ့မည် ထင်သည်။
သဘောင်္ဆိပ်ရောက်တော့ ကျွန်တော်စီးရမည့် သဘောင်္ (အခုစီးနေသည့် သဘောင်္)က ငါးရက်မှ တစ်စင်း သာ ထွက်သည်တဲ့ မနက်ဖြန်မှာ သဘောင်္ပတ်ရှိသည်ဆိုတော့ ကျွန်တော်ဖြင့် ရုတ်တရက် ပျော်သလို တောင် ဖြစ်သွားသည်။
လက်မှတ်မေးတော့ အထက်တန်းအတွက် လက်မှတ်မရှိတော့ ဘွတ်ကင်ပြည့်နေပြီ။ ရိုးရိုးတန်းမျာ ပိုက်ဆံ ပေး နေရာဦးခိုင်းပါလားဟု လက်မှတ်ရောင်း စာရေးက အကြံပေးသည်
ကျွန်တော် ဒေါသထောင်းခနဲ ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ နေရာဦးပေးတဲံ ကောင်လေးတွေကို ငွေအထပ်လိုက် ကျွန်တော် ပစ်ပေးနိုင်သည်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ရိုးရိုးတန်းက မစီးနိုင်။ ဘယ်တော့မှလည်း စီးလိမ့်မည် မဟုတ်။
ဒေါသဖြစ်လိုက်ချိန်မှာ ကျွန်တော့်မျက်နှာ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားပေမယ့် ဒါကို ချက်ချင်းမှာပဲ ပြင်ဆင် လိုက်နိုင်သည်။ ရယ်ကာ မောကာနှင့် ‘ပိုက်ဆံ’ပိုပေးမယ်၊ အပ်ပါးတစ်စောင် ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပါ’ ဆိုတော့ စာရေးက ရှူးရှူးရှဲရှဲ၊ သူဘယ်တော့မှ မှောင်ခိုမရောင်းတဲ့ အကြောင်း ရောင်းလို့ လည်း မရတဲ့အကြောင်း၊ ပစ်ပစ်ခါခါ ပြောချိန်မှာ စာရေးရဲ့ မျက်နှာမှာ မာနရိပ်ကို ဖျတ်ခနဲ တွေ့လိုက် ရသည်။
‘တစ်ခါတလေမှာ အထက်တန်း ကြိုတင်လက်မှတ်က ပျက်ကွက်တဲ့ လူရှိတတ်ပါတယ်၊ အဲဒီလို ပျက်ကွက် တဲ့ အခါဆို ထပ်ရောင်းပေးပါတယ်၊ မနက်ဖြန် စောစောတော့ ကြွခဲ့ပေါ့ဗျာ’
စာရေးရဲ့ ဘေးမှာ ထိုင်နေသူ (ကုန်ထမ်းအလုပ်သမားဖြစ်ဟန်တူသည်)က ပြေပြေပျော့ ပျော့ ပြောတော့ ကျွန်တော့် ခက်ထန်ထန် စိတ်က အနည်းငယ် လျော့ကျသွားခဲ့သည်။
ညအိမ်ပြန်ရောက်တော့လည်း ကျွန်တော့်မှာ ဘယ်လို့မှ အိပ်လို့မရ၊ သဘောင်္လက်မှတ်မရလိုက်မှာကို အစိုးရိမ် ကြီး စိုးရိမ်နေခဲ့သည်။
အထက်တန်းစီးမယ့်သူတွေရဲ့ သွားလာရေးကိစ္စ ပျက်ပြား သွားစေချင်သည်။
တကယ်ပါပဲ ကျွန်တော်ဖြင့် ရိုးရိုးတန်းက စီလိုက်ရရင် သဘောင်္ပေါ်မှာ မွန်းကျပ် မေ့မြောသွားမလား မသိ။ ကုန်စိမ်းတွေ ကုန်ခြော်ကတွေ၊ ဆီပီပါတွေ (တိရစ္ဆာန်တွေတောင် ပါသေး) ကြားမှာ ခြေချစရာ တစ်နေရာ တောင် ခဲယဉ်းလွန်းတဲ့ ရိုးရိုးတန်းလို နေရာမျိုးကတော့ ကျွန်တော့်တစ်သက် စီးမှာလည်း မဟုတ်။ ကျွန်တော်က လူနံ့၊ ချွေးနံ့၊ အနံ့ဆိုးအားလုံးကို ကြောက်တတ်သည်လေ။ ဒီနေ့မနက် ၄နာရီ ထိုးပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော်သဘောင်္ဆိပ်ကို ရောက်ခဲ့သည်။
သဘောင်္အောက်ထပ် နောက်ပိုင်း ရိုးရိုးတန်းနေရာဆီကို လူတွေ တဖွဲဖွဲ လာနေကြသည်။ တချို့ ကလည်း ၀က်တွေ ကြက်ခြင်းတွေကြားမှာ တုံးလုံးပက်လက် အိပ်ပျော်လို့၊ သူတို့ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော် ကြက်သီးမွေးညင်းပင် ထသွားသည်။ ဘယ်လိုလူတွေလဲ၊ ဘယ်အချိန်တည်းက သဘောင်္ပေါ် ရောက် နေကြတာလဲ၊ ညအိပ်နေရာယူတာလား အစောကြီးထလာတာလား၊ ဒီထက်စောရရင်တော့...။
ကျွန်တော်သူတို့အစား ရင်တုန်လှသည်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စက ပြဿနာမှမဟုတ်တာ၊ ကျွန်တော့်အတွက် အထက်တန်းလက်မှတ် ဒါက အရေးကြီးသည်။ စာရေးဆီ ၀င်စုံစမ်းတော့ ၆နာရီမထိုးခင်မှာ ပျက်ကွက် အတွက် ရောင်းပေးမည်ဆိုတော့ စိတ်မအေးနိုင်ဘဲ စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေ ကျပြီးရင်း ကျလာခဲ့သည်။
လက်မှတ်ရုံနှင့် မလှမ်းမကမ်းမှာ ရှိနေသည့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးမှာ သွားထိုင်လိုက် တော့သည်။ ကျွန်တော်သောက်ချင်သည့် မာလ်တိုဗာမရှိ။ နက်စ်တောင်မှမရှိ၊ ချက်နို့ဆီနဲ့ ဖျော်ထားတဲ့ လက်ဖက်ရည် ကိုတော့ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ မျိုမကျနိုင်၊ တစ်ငုံနှစ်ငုံတောင် ကျွန်တော် သောက်ချင်စိတ်မရှိ။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်မှာလိုက်ပြီး စားပွဲထောင့်စွန်းဆီင်္ ပို့ထားလိုက်သည်။ ဘာမှ မမှာဘဲ ခပ်ကြောင်ကြောင်ထိုင်မှာမဟုတ်။
အိတ်ထဲမှာ ပါလာသည့် ကျွန်တော့် ကင့်န်တ် စီးကရက် ၃လိပ်ကုန်ချိန် ၅နာရီခွဲလေပြီ။ လက်မှတ်ရုံကို ပြန် သွားတော့ ဘွတ်ကင်အားလုံး ပျက်ကွက်မရှိတဲ့။ ကျွန်တော်ဖြင့် နံနက်ခင်းမှာပင် ချွေးစို့လာလေသည်။
စာရေးက သိပ်အရေးကြီးရင်လည်း သဘောင်္ခေါင်မိုးပေါ်က စီးပါလားဟု မပွင့်တပွင့် ပြောတော့ စာရေး မျက်နှာကို ပိတ်ထိုးပစ်ချင်စိတ် အဆမတန်ကဲထွက်လာသည်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်ကို ကျွန်တော်ထိန်းနိုင်ခဲ့သည်။
စိတ်လိုက်မာန်ပါ ရမ်းကားတာမျိုး ကျွန်တော် စက်ဆုပ်တတ်သည်လေ။
ဒီလိုနဲ့ သဘောင်္က ထွက်ခွာမည့်အချိန် နီးလာခဲ့သည်။
သဘောင်္ ခေါင်မိုးပေါ်ကို ယောကျာ်းသားများ အလျှိုလျှိုတက်သွားကြတာကို ကျွန်တော် အတိုင်းသား မြင်နေသည်။ ဒါနဲ့ပဲ ကုန်းဘောင်တံတား ဆွဲသိမ်းဖို့ လုပ်နေချိန်မှ စိတ်တုံးတုံးချ ဆုံးဖြတ်ပြီးနေပါဦး တားရင်း သဘောင်္ဆီ လျှောက်ခဲ့ရသည်။ အပြေးတောင် မသွားရဲ၊ ကျွန်တော်ခွာဖြင့် ကက်ဂလုပ် ဖိနပ်က ရွှံ့စေး များ ပေကျံနေသော ကုန်းဘောင်ပေါ်မှာ ချော်ချက်ကျသွားနိုင်သည်။
ကျွန်တော်အထက်တန်းအခန်းကိုလည်း စိတ်မကူးတော့၊ ရိုးရိုးတန်းနေရာကိုတော့ လုံးဝ ကွင်းရှောင် ပစ်လိုက်သည်။
ကျွန်တော်သံလှေကားလေးကတစ်ဆင့် သဘောင်္ခေါင်မိုးပေါ်ကို သတိကြီးစွာဖြင့် တက်လာခဲ့ ရတော့သည်။
မနက် ၆နာရီအတိမှာပင် သဘောင်္စတင်ထွက်ခွာလာပြီး ရေစီးကို ဒေါကြီးမောကြီး ထိုးခွဲသွားပေပြီ။ သဘောင်္ရဲ့ ခေါင်မိုးပေါ်မှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက် သီးသန့်၊ လွတ်လပ်စွာ နေရာတစ်နေရာရခဲ့ပြီ။
မြစ် ဟိုဘက်ကမ်း အောက်ထဲကနေ နေလုါံ်က ထိုးထွက်လာဖို့ အားယူနေသည်။ အေးစိမ့်မှုကဲသော လေက ကျွန်တော့်မျက်နှာ ဆံပင်၊ ရင်အုံတို့ကို ထိပါးနေသည်။ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သောလေရဲ့ အရသာ ကို ကျွန်တော် တွေ့ခဲ့ပြီ။ ရိုးရိုးတန်းနဲ့ အပ်ပါးက လူတွေတောင် သနားမိသေးရဲ့။
အခုမှ ခေါင်မိုးပေါ်က လူတွေကို ကျွန်တော်ကြည့်မိပေါ့။ ပီပါကြီး သုံးလေးလုံး ဆင့်ထားသလို ရှိသည့် ခေါင်းတိုင်ကြီး နားမှာ လူတွေ ပြွတ်ခဲ အုပ်ဖွဲ့ထိုင်နေကြသည်။ ခေါင်မိုးပြင် အကျယ်ကြီးပေါ်မှာ ကျပ်ခဲစွာ ထိုင်နေတာ ကို ကျွန်တော်ဖြင့် အံ့သြလို့ မဆုံးနိုင်တော့)
မနက်(၇)နာရီလော်ကမှာ နေလုံးက ကျွန်တော်တို့သဘောင်္နှင့် ရင်ပေါင်တန်းနေသည်။ တဖြည်းဖြည်း မြင့် တက်လာမည်။ ပြီးတော့ အစွမ်းကုန်ပူမှာလား မသိ။ ကျွန်တော့်မှာ စိုးရိမ်လာနေမိသည်။
တကယ်ပါပဲ။ ကျွန်တော် စိုးရိမ်သလိုပင် နေလုံးက သဘောင်္ထက်မြင့်တက်လာချေပြီ။ အပူဒဏ်ကို စတင်ခံစားနေရပါပြီ။ ကျွန်တော်မကြိုက်၊ သည်အလင်းရောင်၊ သည်အပူကို မကြိုက်။
သားရေအိတ်ထဲမှ ရေဘင်န် မျက်မှန်ကို ထုတ်တပ်လိုက်သည်။ မြစ်ရေပြင်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ညို့မောင် လို့သွားသည်။ လက်ကိုင်ပ၀ါကို ခေါင်းပေါ်ဖြန့်တင်လိုက်သည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့အပူဒစ် ကာကွယ်မှုက ဘယ်လိုမှ မရတော့။ ကျွန်တော် လည်စင်းခံနေရတဲ့ သိုးတကောင် လို ဖြစ်နေသည။်
ခေါင်းတိုင်ဘေးက လူတွေကတော့ ခေါင်းတိုင်က ကျလာတဲ့ အရိပ်အောက်မှာ ကျွန်တော်မနာလိုဘူး။ သူတို့ကို မနာလိုဘူး။ ၀ယ်ပစ်လိုက်ချင်တယ်။ ဒီအရိပ်ကို ၀ယ်လို့ရရင် ၀ယ်ပစ်လိုက်ချင်တယ် ခင်ဗျားတို့ ရောင်းမလား၊ ကြိုက်သလောက်ယူစမ်း၊ ပိုက်ဆံတစ်ထပ်ကြီး ကျုပ်ဆီမှာ ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ ယောက်ယက် ခတ်နေပြီ။
ကျွန်တော့်အကြည့် ဟိုဟိုသည်သည် ရွှေ့တော့် ကျွန်တော့်လိုပဲ သီးသီးသန့်သန့် ထိုင်နေသော လူတစ်ယောက် ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
သည်လူက ကျောပေးထားသည်မို့ မျက်နှာကို မမြင်ရ၊ ၀တ်စားဆင်ပြင်က ဘယ်လိုမှ အဆင် အသွေးမပေါ်။ ကျွန်တော့်ဆိုင်က အလုပ်သမားတွေကမှ သူ့ထက် အပြတ်သားနားဦးမည်။ ခုတော့ သည်လူ့ အ၀တ်က ညစ်မှုန်လှသည်။
ကျွန်တော်သည် သူ့ကိုကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်းမှာပင် ရုတ်တရက် ပျော်လာသည်။
သည်လူက နေရောင်ဘက်ဆီ မျက်နှာမူ၊ ခေါင်းငိုက်စိုက်ချထားသည်မို့ သည်လူ့ရဲ့ အရိပ်က သဘောင်္ ပေါ် မှာ လဲကျလျက်။
ဒါကို ခေါင်းတိုင်အရိပ်မှာ ကျပ်ကျပ်တည်းတည်း ခိုလှုံသူတွေ မသိတာလား၊ သတိမထားမိတာလား နှမြောဖို့ ပင် ကောင်းသေးတော့။
ကျွန်တော်ထိုင်ရာက ဖင်တရွတ်ဆွဲပြီး ထိုလူ့အရိပ်ဆီ သွားလိုက်သည်။ လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ မသွားရဲ၊ လှုပ်လှုပ်အနေအထားမှာ ကျွန်တော် လမ်းမလျှောက်ရဲပါ။
ကျွန်တော်အရိပ်လေးဆီ ရောက်သွားခဲ့ပြီ။ ဒူးဆန့်၊ ခြေဆန့် အနေအထားမဟုတ်ပေမယ့် သက်သောင့် သက်သာစွာ နေရာ အေးအေးလေးတစ်ခု ကျွန်တော် ပိုင်ဆိင်ခဲ့ပြီ။ စောစောက ရုန်းကြွ နေသော ဒေါသများလည်း ပြေလျော့သွားပြီ ဖြစ်သည်။
အိတ်ထဲမှ ကင့်စ်တ် တစ်လိပ်ထုတ်သည်။ စီးကရက်ကို တရှိုက်မတ်မတ် ဖွာရှိုက်ပြီး တစ်ဝက်ကျိုး ချိန်လောက်မှာ ကျွန်တော့်အတွက် အရိပ်ပေးသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို စီးကရက်တစ်လိပ်လောက် တိုက်လိုက်ဖို့ စိတ်ကူး မိသည်။
သည်လူကတော့ ကျွန်တော်တိုက်လိုက်မည့် စီးကရက်ကို မြင်ဖူးမည်တောင်မထင်။ သူ့အတွက် တစ်သက် လုံး ပြောစရာ ကြွားစရာ စီးကရက်လေး ဖြစ်နေမှာလား မသိ။ ကျွန်တော် စီးကရက်တစ်လိပ် တိုက် လိုက်ပါမည်။
'ဒီမှာ....ဒီမှာ' ကျွန်တော် ထိုလူ့ကျော်ကို လှမ်းပုတ်ပြီး ခေါ်လိုက်တော့ ထိုလူ ကျွန်တော့်ဘက် လှည့်လာသည်။
ရုတ်တရက် ကျွန်တော် ခုန်ထပစ်တော့မလို ဖြစ်သွားသည်။ ကျွန်တော့် လက်ဖျံမှာ၊ ခြေထောက်မှာ၊ တစ်ကိုယ်လုံး မှာ ကြက်သီးတွေ ဖြန်းခနဲ ထလာသည်။ သွေးတောင် ဆုတ်သွားခဲ့သည်လား မသိ။ မျက်နှာ က ပွရောင်းရောင်း၊ နှာခေါင်းကဆို ပြားကပ်လို့တောင်နေသည်။ နားရွက်နှစ်ဖက်ကလည်း ထူအမ်းအမ်း။ ကျွန်တော့် ကို မေးငေါ့ပြပြီး 'ဘာလဲ'ဆိုသည့် အသံက နှာခေါင်းသံ အပ်ြည့၊ နှာစေးနေသည့်သူ တစ်ယောက် ရဲ့ အသံနဲ့တောင်မတူ ကျွန်တော် တံတွေးကို ပျစ်ခနဲ ထွေးချင်စိတ်တောင် ပေါ်လာသည်။
ထိုလူပြန်လှည့်သွားတော့ ကျွန်တော့်ရင်က မြင်းအကောင်တစ်ရာလောက် ရဲ့ ခွာသံတွေ မြည်ဟီး တုန်ခါ နေလေသည်။
ညနေ ၅ နာရီလောက်မှာ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းရဲ့ မြို့ကလေးကို သဘောင်္ဆိုက်ကပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော် စီးရတဲ့ သဘောင်္ခရီးစဉ် ကတော့ နေရောင်အောက်မှာ ပူပြင်းရှတစွာ...။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်သိပ်မမှု၊ ကျွန်တော့်အတွက် အရိပ်ကလေး တခု လုံခြုံစွာ ရနေပြီ။
ကျွန်တော် က ပူပြင်းမှုဒဏ်ကို ကြောက်တတ်သည်လေ...။